မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်【အဆိုပါအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ # No.1 】🥇ဒူဘိုင်းအတွက်စီးပွားရေး Build
ဒူဘိုင်း7ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဧပြီလ 19, 2019
တစ်ဦး Marketing Manager အဖြစ်ဘဝကဖန်တီးဘယ်လိုနေသလဲ?
မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဗေါင်းနှင့်အတူဒူဘိုင်း👳က Man အတွက်စီးပွားရေး Build
Johns အနောက် - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
ငှားရမ်းသို့မဟုတ်ကြီးထွား Marketing Manager ဖြစ်လာ? မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမယောဟနျသအနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏။ ငါသည်သင်တို့ကိုအင်တာနက်နှင့် LinkedIn ထံမှဖောက်သည်ရဖို့ကူညီပေးပါမည် !.
သူကဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားသောနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏ဦးဆောင်ကြီးထွား Hacker ခေါ် ဒူဘိုင်းအင်တာနက်စျေးကွက်။ လူကြိုက်အများဆုံး social networking site များကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာထိပ်တန်း 10 စျေးကွက်၏တဦးတည်းကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
သန်းကျော်ကလူဒါဟာဦးဆောင် Facebook နှင့် LinkedIn စာမျက်နှာများတွင်များအတွက်လူသိများသည်ယောဟန်ကိုအနောက်၏ social networking site များကြည့်ရှုသည်။ ဤသူကားငါ၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒူဘိုင်းကိုအားပေးအားမြှောက်ဖို့ပါ!
ဒူဘိုင်းနှင့်လန်ဒန်ကနေအတော်များများစီးပွားရေးသမားများသူတို့ထိပ် 100 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြလို့ပြော ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လူမှုမီဒီယာများတွင်.
ယောဟန်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လယ်ပြင်တွင်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်၏စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး 30 ၏နှစ်အောက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
SEO ဆိုသည်မှာ, Google နှင့် Bing မှခုနှစ်တွင်စျေးကွက်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အတည်နေရာသည်စျေးကွက်စျေးပေါပါသလဲ
ဟုတ်ကဲ့, စျေးနှုန်း၏ 50% အဘို့ထိုသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကြီးထွား Hacker တွေအတွက်ဘာကိုပေးဆောင်နေကြသနည်း
positioning တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်အချိန်-စားသုံးလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်။ ငါ၏အအေဂျင်စီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအခြားသူများအကြား, လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်:
analysis နဲ့ content ၏ပြီးပြည့်စုံသောသင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်,
ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်၏လိုက်လျောညီထွေ, meta tag များခေါင်းစဉ်နှင့်ဖော်ပြချက်,
က်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်များနှင့် source code ကိုဒြပ်စင်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ optimization,
ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ search engine ကိုစက်ရုပ်မှမှန်ကန်သောလက်လှမ်းနှင့် ပတ်သက်. လုပ်ဆောင်မှုများ။
Google က Tool ကို Configuration (စသည်တို့ကို Google Analytics,),
link ကိုဒိုမိန်းပရိုဖိုင် (link ကိုအဆောက်အဦ) နှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ။
အင်တာနက်ကိုစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ကျနော်တို့ကြော်ငြာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်ဤအခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့အသစ်သော client များရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကြော်ငြာရကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာစောင့်ရှောက်ကျနော်တို့သူတို့သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်ဝယ်ကျောကသူတို့ကိုသွားပါ။
ရွယ် (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ) ။
အီးမေးလ်ပို့ရန် Marketing ကို။
ဖုန်းပေါ်မှာစျေးကွက် (အသိပေးချက်များ) ။
တိုးတက်မှုနှုန်း Hacking - သာလျှင်ထိရောက်သောသင်၏လုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးထွားနည်းလမ်းများ
သငျသညျသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါသလား - ငါသညျကိုကူညီနိုငျငါ့ကို Call! (ကသေးငယ်တဲ့နှုန်းကိုရန်လွှတ်တော်သို့အဆိုတင်)
ငါသည်သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေး + အသစ်ကဖောက်သည်များခံစားကြည့်ပါဦးမည်
သင်တစ်ဦးအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိပါသလား? - ကျနော်တို့ကအတူတကွဖွံ့ဖြိုးမည်! (ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင် + အီးမေးလ်စျေးကွက် + ကျော်လွှားအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်)
သင်တစ်ဦးကြီးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါသလား - သင်ကံကောင်းပါစေထဲကနေ, သင်ကအများကြီးကိုဖျက်ပစ်ရန်တာပေါ့!
(ကျနော်တို့နိုင်ငံတကာကကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ် - ငါဒူဘိုင်း၌တိုက်အခြားသူတွေအကြား, လန်ဒန်အိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား - ။ တစ်ခုလုံးကိုရက်သတ္တပတ်အတွင်း 24 ရက်ပေါင်း - ကျနော်တို့ခက်ခဲ 7h အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ငါ့ကို Check, Google မှာရိုက်ထည့်ပါ: ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
ပြီးတော့သင်ဘယ်လောက်မြင်သောအရာကိုငါ linkedin, Facebook, Twitter နဲ့ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြပါလိမ့်မယ် Google က.
ငါ၏အ client များ '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများငါ၏အကဲဖြတ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်အင်တာနက် & ဒေတာပေါ်ရောင်းအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆလိုက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်။
အိုကေ, ခြေရင်းအရာမှရယူလိုက်ပါ။ သင်ဘယ်လောက်နည်းနည်းလေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အ site ကိုမှလာပါတယ် အဆိုပါပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးနေထိုင်စတင်ရန်, အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
တကယ်တော့ကျနော်တို့အခြားလူကိုကူညီငွေရှာ။ ဒါဟာသင်ထူးဆန်းပုံရပေမည်, သင်မူကားတခြားသူတွေကိုကူညီနိုင်ကြသည်မှန်လျှင်, သင်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအနညျးငယျသောအရာတို့ကိုသတိရသင့်ပါတယ်သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီစတင်နေသည်။ သင်တို့အပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပထမအခြေခံအရာသည်၎င်း၏မရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ, သင့်ပုဂ္ဂလိကအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲစျေးကွက်ကသင်၏အဆွေခင်ပွန်းမဟုတျကွောငျးသငျကိုယျတိုငျကရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်တခါတရံ 18 ကျော်နာရီသိုးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါလာသောအခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ ငါနေမကောင်းခဲ့တာသို့မဟုတ်မရှိတော့ခွန်အားရှိခဲ့။ ထိုအခါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်သမ္မတသကဲ့သို့သင်တို့သေချာဘို့, ကံမကောင်း, သငျသညျငါလုပ်နေတာပြီဘာ mummy လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ် ဒီတော့ဝေးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခြင်းနေစဉ်။
သင်တန်း၏, ယင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ ယင်း၏အတက်အကျရှိပါတယ်။ သင့်ကုမ္ပဏီ၏ပထမတစ်နှစ်ဆိုအုန်းသီးကိုမျှော်လင့်မထားပါနဲ့။ သာတစ်နှစ်အကြာတွင်သင်သက်သက်သာသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာရရှိခဲ့ပြီးဒီပိုက်ဆံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ Google မှာနည်းနည်းပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမြင်လိမ့်မည်။ ကပိုကလူ, သင်၏နာမအဘို့ရှာဖွေနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏န်ဆောင်မှုကိုရှာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ virtual world ၏တတိယနှစ်တွင်, သငျသညျဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 10,000 တစ်လတစ်အမြတ်အစွန်းကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးကောင်းတစ်ဦးကငွေဖြစ်ဟန်ကြောင်းဒါပေမယ့်သင်ကတစ်နာရီခွဲလျှင်သင်ဒီကုမ္ပဏီအတွက်ထားအလုပ်2အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်နာရီအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးစူပါမားကတ်ရိုမေးနီးယားအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင်ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းပျမ်းမျှစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတစ်နာရီအဘို့ကောင်းသောပိုက်ဆံအလုပ်လုပ်အပေါ်ရေတွက်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ အစား, သင်တစ်ဦးကယ့်ကိုအနိမ့်လစာများအတွက်ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်, သင်အမှန်တကယ်သာဒိုမိန်း hosting အတွက်နှင့်သင့်ဦးခေါင်း၌ဆီနည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းတည်နေရာနှင့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်မယ့်ခက်ခဲတဲ့ခံဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကပေါင်းသင်တကယ်ကိုသည့်အချိန်တွင်မဆိုကြိုက်တယ်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ညအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်တစ်နေ့တာအတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သငျသညျကို Google နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေရာချစီမံဆောင်ရွက်ပါလျှင်၏သင်တန်းကိုသင်နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးစဉ်ပျံသန်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုသွားရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကစားအကောင်းအဆိုး cons ဖြစ်ကြသည်။ အလွန်ကောင်းစွာအင်တာနက်ပေါ်မှာကုမ္ပဏီတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်, သင်5နှင့် 10 နှစ်အကြားလိုပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသင်ထို့နောက်ကွန်ပျူတာမှာတစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မထိုကဲ့သို့သောများမှာ Bentley နဲ့လှပတဲ့ Villas ကိုယ့်ကိုကိုယ်မဝယ်ကံမကောင်းပါကပိုပြီးနာကျင်သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အသက်တာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နှင့်စငျသညျမဆိုညဥ့်အိပ်မည်မဟုတ်အံ့သြပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, သင်သည်ထိုသူတို့တားစီး and drop ရန်သင့်အထက်မျက်ခမ်းကော်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးကို double-တဖက်သတ်တိပ်ကိုဝယ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ရိုးသားစွာထိုသို့ပြုမှတစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်လုံလောက်စွာဘယ်တော့မှသည်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီကြောင့်ဖြစ်နိုင်ငွေရှာဖို့လုံလောက်တဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအရရှာဖွေနေပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ဦးအချိန်နှင့်တိုးတက်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျကွိုးစားအားထုရန်ရှိသည်များနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှိသည် နှင့်သင်တန်း၏, အလွန်ခဲယဉ်းလမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆျော။
ဥပမာ, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤအဖွဲ့အစည်းကိုတညျဆောကျပါပွီ။ ငါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ CV forwarding ကိုန်ဆောင်မှုများရှိခဲ့သည်ကိုဤလုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမည်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်အဖြစ်အမည်နှင့်လမ်းကိုပြောင်းပေးပါ။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်းမှာအဘို့အငွေကောက်ခံလျက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်သင်သာကဘယ်လောက်ခက်ခဲစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ရပြေးရန်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကှယျမှုရယူ။ သင့်မိသားစုနှင့်အတူနှငျ့သငျလိုကျနာဖို့ရှိသည်နှင့်သင်သင်တန်းရဲ့အစမှာသူကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ဖို့ရှိသည်သောအလုပ်အကိုင်သင်တန်းအိမ်၏အချိန်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ရလဒ်ရှိပါတယ်။
ငါဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Laptop ကိုဖြည့်ခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်မှစ. ကောင်းတစ်ဦးဦးတည်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနေသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိရပါ။ ငါတောင်စိတ်ကူးမနိုင်ထက်အများကြီးပိုငွေရှာဖို့ရှာနေတာ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါအလတ်စား Facebook နှင့် LinkedIn ကြော်ငြာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ အကြောင်း, သင်တန်း၏, ငါ့ကိုသင်ဒူဘိုင်းဈေးကွက်အပေါ်တည်ငြိမ်သောကုမ္ပဏီရှိပါဘူးစေသည်။
ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စျေးကွက်စီးပွားရေးကိုအဖြစ်အခြားတစ်ဖက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပြုလုပ်ကူညီပေးပါမည် သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်တည်ဆောက်ရန်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်။ သငျသညျ Done အမှုအရာ, သင်သည်မေတ္တာတရားကိုအချိန်ကိုလုပျခငျြတဲ့အချိန်ရနိုင်ပါလိမ့်ချင်တယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အတွက်အချိန်စာရင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်အပြုသဘောနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ Market ကမဟုတ်ပါဘူးသူတွေကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုမှတ်မိဖို့ရှိသည် Do ?. ဒါကြောင့် သင်ပင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခင် သင်အမြဲသင်သည်သင်၏နယ်ပယ်ကိုသိနှငျ့သငျဖို့လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်ရာခိုင်နှုန်းသေချာဖေနှုန်း hundred doobie စေခြင်းငှါ, တက်ရနှင့်သင့်က start စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု run နေ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်အမြန်ဆုံးလမ်း လူမှုရေးမီဒီယာကနေစတင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျယနေ့ပိုကြီးတဲ့ဖောက်သည်များ၏ပရိသတ်ကိုသို့မဟုတ်ပင်သင်၏မိတ်ဆွေများကသင်၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးဒါမှထုတ်ကုန်များနှင့်သူတို့ငှါအခြားအအလားအလာဖောက်သည်လိမ့်မည် သင့်ကုမ္ပဏီဝင်တိုက်ရနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမေး။
ဒါဟာအနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းမှအမြန်ဆုံးနှင့်ထူးချွန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ကောင်းတဲ့ဘဝပါပဲ။ သင်အွန်လိုင်းငါ၏အကုမ္ပဏီအတိုင်းလိုက်နာနိုင်သကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါတို့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် Facebook နှင့် LinkedIn ကြောင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ ထိုအရပ်၌ထံမှ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့အလွန်ကောင်းသောဖောက်သည်ရတဲ့နေကြတယ် ကျွန်တော်နည်းပြနှင့်ကသူတို့ကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရှိရန်ကူညီနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရိုးရိုးသားသားကြောင့်အများဆုံးအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပတ်ပတ်လည် $ 5,000 တစ်လအောင်ဖို့ဘယ်လိုလိမ့်မည် သငျသညျနာရီတစ်ရက် 10 မှရှစ်ပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်။ ကျွန်တော်တို့ကို ယူ. လျှင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစံအလုပ်အကိုင်အဖို့ပိုက်ဆံဒီလိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေ Imani နှင့်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ဘဝကိုဦးတည်ကောင်းတစ်ခုနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သင်ယနေ့ဦးတည်ကြသည်မဟုတ်လျှင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဖြစ်စေခြင်းငှါလမ်းသည်မဟုတ် လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးကူညီကောင်းသောစိတ်ကူး။
ဒါကကုမ္ပဏီအပတ်တိုင်းဒေါ်လာရာနဲ့ချီန်းကျင်စေရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ထိုအခါလစဉ်လတိုင်းဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူကတစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ဝေးနဲ့ ယခုလုပ်ငန်းကိုစူပါသွား ကောင်းစွာနှင့်တစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာလုပ်ဖို့အများကြီးအလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းအမှုကိုပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်ရုံဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အတူဖောက်သည််ထမ်းဆောင်နေသည်နှင့် သူတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေ။
ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ကုမ္ပဏီ Run ဖို့ကိုဘယ်လိုဆိုးတာလဲ
သင့်ရဲ့အချိန်အများစုကို, သင်၏မယားစိတ်ကျေနပ်မှုမရပါလိမ့်မယ်။ အစအဦးအပြစ်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်, သင်မနက်စာစားခြင်းကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် 15 အကြောင်းကို wrote: 00 သင်တစ်ဦးရေချိုးရပါလိမ့်မယ်သင်တောင်မှမနေ့ကကတည်းကခွေးတစ်ကောင်ကျန်ရစ်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ 18 ကြောင့်တစ်ဝက်ဘုတ်အဖွဲ့ပေမယ့်သင့်ရဲ့ခွေးကိုအလိုတော်ရှိလိမ့်မည်: ထိုအခါမုန့်ညက် 00 မှာဖွစျလိမျ့မညျ လာမယ့်ခြေလှမ်းညမှာအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်မဟုတ်ပါထွက်ကျန်ရစ်မရအိမ်နီးချင်းကောင်းနံနက်သင်သည်ပြောနေကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, သူငယ်သင်သည်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းလမ်းပေါ်မှာပေါ်တွင်သင်မှာအော်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုအသေချာမမုန့် မည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏တနျခိုးကူညီပေးပါမည် ကူညီခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်သို့ပြောသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျနီးပါးမျှဇနီးရှိသည်။ သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်တဲ့အခါမှာ ?. အဘယ်အရာကိုဘာဖောက်သည် 15 မက်ဆေ့ခ်ျပြီးနောက်အိမ်တော်၌ stinks ။
သငျသညျနောက်ဆုံးတော့ကံမကောင်းသငျသညျထားပြီးကွန်ပျူတာကနေလည်းမျက်စိနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်ကြောင့်စင်္ကြံ၏အစမှာမြင်ရဖို့သင့်မျက်စိ squint သောအခါသင်ဆဲသင့်ရဲ့ဦးတည်ချက်ထဲမှာအီးမေးလ်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျက virtual ကမ္ဘာမှ စတင်. ဝယ်ဖို့အတှေးစုဆောင်း သငျသညျဖြည်းဖြည်းသင်၏မယားကိုသင်မေးလျှင်သင်၏ဦးခေါင်းကပထမဦးဆုံးအဖြေကိုဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုအတည်ပြုရန်စတင်ခဲ့သည်ဘယျမေးခှနျးကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိထားမိဖြစ်လာဖို့စတင်။
ဒါဟာဒုတိယခြေအိတ်အိပ်ရာနောက်ကွယ်မှတစ်ပတ်အဖြေကနေအမှိုက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်နေရာတိုင်းသင်ဟာခွေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်အရေအတွက်ကို3ဖြေဆိုနိုင်ပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုနောက်ဆက်တွဲဇာတ်စင်သာပိုဆိုးပါလိမ့်မည်, သို့သော်ယခုအချိန်တွင်လာကြလိမ့်မည်သင်ကသင်၏အကောင့်ပြည်နယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ဖို့စတင်သည်သိမြင်လာသောအခါသူ့အဘို့ရှည်လျားစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြောင့်သင့်ရဲ့မေမေကနေစလှေတျတျောပိုက်ဆံမရှိ, သင်သည်သင်၏အလုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရှုရန်စတင် ထိုသို့ကွန်ပျူတာထိုင်နေသည်နှင့်သေးပိုပိုပြီးအသီးအနှံများဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်သင်သည်သင်၏အလုပ်ကသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သင့်ဘ်ဆိုဒ်ကို Google အဆင့်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အနေအထားရဖို့ရန်စတင်ဖြစ်ကြောင်းသင်နှင့်အတူငါ့ကိုမှဖတ်ကြည့်ပါမမြင်မိပါဘူး။
ထိုအသေချာများအတွက် ကလူသင်တို့အဘို့ရှာကြသည် ပြီးတော့လူတွေကိုသင်နှင့်တူ ပို. ပို. လူတွေရှိပါတယ်အကြံပြုသောအရာကိုချင်တယ်။ ထိုသူတို့က, ငါသည်ဖုတ်ကောင်မဆိုလိုဘူးသငျသညျကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုသင်တို့အားပေးနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေကြသည်နှင့်အသင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အွန်လိုင်းငွေရှာကြလိမ့်မည်သူတွေကို။
ဤရွေ့ကား, သငျသညျနောက်ဆုံးတော့ဒီကွန်ပျူတာကနေနိုးထလာသောအခါယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကကွန်ပျူတာကနေဖွင့်မရ, အခန်းထဲမှာမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်ထမြောက်စေ နေရဲ့ရောင်ခြည်ရုတ်တရက်သင်၏မျက်နှာကိုမထိကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရ သငျတို့သအဲဒါကိုတိုင်းမိတန်ဖိုးရှိခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။
သင်တစ်ဦးကယ့်ကိုကြီးမြတ်က်ဘ်ဆိုက်, ကောင်းစွာ-positioned စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသည်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်ကသင်မှသာသင့်ရဲ့ဇနီးနှင့်မျှမတဦးတည်းကိုဖန်ဆင်းသောအမှုကိုပြု၏သူဌေးကအရာအားလုံးကယူသှားနိုငျခဲ့ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျကိုပငျစာမကျြနှာကိုဆုံးရှုံးမည်, ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့အသိပညာ သငျသညျပြီးသားပြီ သင်သည်အခြားအကြီးအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်း SEO ဆိုသည်မှာဂျော့ဘ်များအတွက်ဒီတော့ဂရိတ်ဖြစ်သနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ယခုအချိန်အထိဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အများအားဖြင့် ကျနော်တို့ကအိန္ဒိယလူမျိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြ နှင့်အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ဖာစီဘာသာစကားမပြောတတ်သူများ။ သငျသညျဥရောပ၌ဒါမှမဟုတ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းနေထိုင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ကြသည် သင်ကူညီခြင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ၌သင်တို့၏အလုပ်အကိုင်ပေး။
သင်အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်ရနိုင်နှင့်အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းရာထူးတိုးရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒူဘိုင်းမြို့တို့သည်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကောင်းဆုံးနေရာကြောင်းနောက်ထပ်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည် ဤအရပ်ဌာနကိုပိုမြန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိအခြားသောအရပ်ထက်အလုပ်တစ်ခုပွဲစဉ်ရတဲ့အတှကျကယ့်ကိုကောင်းလှ၏။
ဒါကကောင်းစွာကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစျထောငျဖွစျပါသညျ သင်အမှန်တကယ်အလုပ်မရနှင့်အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်နဲ့ကျွန်မရဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာမည်။ သင်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်းနိုင်ပါတယ်အောက်ပါ by စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရ လည်းသင်ပြုအဖြစ်အလုပ်ရှာနေကြသူပွဲကပိုလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
ဒါကကုမ္ပဏီသည်လည်းသင်တို့ကိုအကောင်းတစ်ဦးအဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်သူတို့ရဲ့ website တွင်အကောင်းတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ဒူဘိုင်းသည်နှင့်သင်တို့သည်လည်း Boo ဟေး2သူတို့အမှန်တကယ်စီးပွားရေးကိုချွတ်အသုံးအနှုန်းများအတွက်လုပ်နေလုပ်နေအဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ ၌ဤ Automotive ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်ဒူဘိုင်းကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာ သင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြီးတန်းရောင်းအားသို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာဌာနသင့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးများအတွက်ခေါင်းကိုချဉ်းကပ်မှုကိုငါပေးမည်။
ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်း Atwell အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ။ ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးမားတဲ့အဖြူရောင် playset နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအမှန်တကယ်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကလူငှားရမ်းသည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စရှိရာ သင်အမှန်တကယ်သင်ဆဲသူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်မှလာနေကြပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်လုပ်သားအင်အား၏ 80% ကိုသိသည်။ နေပါစေသင်အမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းမှရယူရန်ကြိုးစားလျှင်အရာအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆဲနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏ website တွင်လျှောက်ထားပါ။ သောကြောင့် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက် Haygood အသစ်ကအနုပညာကိုငါပေးမည်။
ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ကအမှန်တကယ်အလွန်သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လုပ်သားအင်အားအများစုသူတို့ကိုငါနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရမတတျနိုငျဘူး။ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံရှိခြင်းလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ထို့နောက်သင်သည်ကျိန်းသေတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်နေနှင့်သင်ထို့နောက်အတူအလုပ်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်ရုပ်သံလိုင်းအမှုဆောင်အရာရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒါရိုက်တာများနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ငှားရမ်း။
ဒါကြောင့်သင်အတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေကြသည်လျှင်သင်ဒီလိုအဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာထိပ်ပေါ်မှာထောက်ပံ့ပေးမယ့်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မှာစကားပြောဖို့နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီး ထို့နောက်သူတို့ကအလုပ်အပိုင်းအပေါ်ထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတိတ်အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုစည်းလုံးညီညွတ်ရလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
စူပါလူသိများတဲ့အဖွဲ့အစည်းက။ အင်တာနက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာချစ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဤကဲ့သို့သောထိပ်တန်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီများကလည်းအမြဲသူတို့၏န်ထမ်းများအတွက်မြင့်မားသောအဖိုးတန်လုပ်ခပေးနေကြသည်။ နှင့် သင်အမြဲအခြားတစ်ဖက်တွင်အကောင်းတစ်ဦးလေ့ကျင့်ရေးကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာယင်း၏လေ့ကျင့်ရေးတည်နေရာအားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ငါတို့အသစ်က tool ကိုရှာတွေ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူများနှင့်အမှန်တကယ်ကွန်ရက်စနစ်များရှာဖွေနေကြသူလူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးပွိုင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ဒူဘိုင်းအတွင်း၌လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ရှာဖွေနေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tool ကိုသုံးပါနှင့်သင့်အီးမေးကိုစာရင်းထဲက poop စောင့်ရှောက်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အတော်လေးလွယ်ကူသော system ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအဖြစ်မှန်ပြုကြရန်ရှိသည်အားလုံးကိုယ့် Gmail ကိုသို့မဟုတ် Hotmail ကသွားရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါသင့်အီးမေးလ်စာရင်းထဲကအီးမေးလ်များကိုတင်ပို့။
သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီသို့ဆက်သွယ်မှု၏အနည်းဆုံးချီးကျူးပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်မည်သူမဆို tools တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သငျသညျအလိုအလြောကျသငျသညျဒုစီးတီးကုမ္ပဏီ သိ. ဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သငျသညျဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်သင်မှတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အခြားလူများကတကယ်တော့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ အခြားလူများငှါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ join ဖို့စိတ်ဝင်စားဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်စမတ် Way ကိုထဲမှာလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ ကျနော်တို့4ဥပမာ 300 လူတွေမှတက် 500 ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးစံလူတစ်ဦးယူလျှင်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးငါတို့၏ website မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်လိမ့်မယ်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို join ဖို့ကျိန်းသေကတန်ဖိုးရှိသူတစ်ဦးမှာပါလိမ့်မည်။
သို့သျောလညျး, ဒူဘိုင်းမှသင်၏မိတ်ဆွေများရဖိတ်ခေါ်ဖို့ထူးချွန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ LinkedIn တို့ profile ကိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကြောင်းကိုသင်၏မိတ်ဆွေများကိုတင်ပို့ဖို့လွယ်ကူသောလမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် BTS ဖြစ်ပါသည် ထို့နောက်ရိုးရှင်းစွာဖိတ်ခေါ်ကျော်ပေးပို့ခြင်း သူတို့ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာ။ ဒါကြောင့်ဒီအလမ်းအတွက်သင်သည်သင်၏ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုရေးမီဒီယာကနေရဦးမည်သာ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အပြင်လူမှုမီဒီယာများတွင်ဖွင့်ပြပါကကူညီလိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် လူတွေကိုချိတ်ဆက် gulf ဒေသရရှိရန်ကူညီပေးပါရန်။ သင်စိတ်ဝင်စားနေသောလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့်ကူဝိတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံမထိုက်မတန်4ဖြစ်ပါတယ်။
အစဉ်အမြဲကောင်းနိုးရာရာရှေးခေတ်ကျားသစ်ပုံနှိပ်စက်အလုပ် vestidos လေးသင်းပါစီးပွားရေးပါတီပါတီရုံးခန်း ၀ တ်စုံအမျိုးသမီးဝတ်ဂါ ၀ န်အအေးခံပခုံး B483
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 5.005ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 20 ဖောက်သည် ratings
အစဉ်အမြဲကောင်းမွန်သောစပျစ်သီးပြွတ်အလှဆင် Contrast အရောင်ချည်ထည်သောအဝတ်အစား vestidos Business Party Office အမျိုးသမီး ၀ တ်ကိုယ်ထည်အ ၀ တ်အစား B463
5XL 6XL ဆောင်း ဦး ရာသီထပ်အရွယ်အစား Plaid ဂါ ၀ န် 2019 ဆောင်းရာသီသာမာန်အမျိုးသမီးဝတ်အရွယ်အစား ၀ တ်စားဆင်ယင်အမျိုးသမီး ၀ တ်ရုံး 4XL ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအားကြီးသောပါတီ ၀ တ်စားဆင်ယင်
Living မျှော်လင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မျှော်လင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီမှပိုပြီးဖိတ်ခေါ်နှင့် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှသူတို့ကိုကူညီ ဒူဘိုင်းမြို့တချို့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆက်သွယ်မှုစေရန်။ မမေ့မလြော့ပါကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကို share ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းသင်အွန်လိုင်းလုပ်နေတာနှင့်မည်သို့ခက်ခဲသငျသညျဖြစ်ကြ၏ဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဒီနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေ။
SEO ဆိုသည်မှာနှင့် အလုပ် စျေးကွက်ထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ?. ငါသည်ငါ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလွန်ငယ်ရွယ်စတင်။ 21 နှစ်ခွဲ၏အသက်အရွယ်မှာကျွန်မပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာ Led မာလ်တီမီဒီယာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ,fမဟုတ်တတျနိုငျသဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကုမ္ပဏီ createdဒီအသက်အရွယ်မှာ High-ပေးဆောင်အလုပ် ind။ nom ငါကြိုးစားခဲ့ ဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရေတွင်းတစ်တွင်း-paid အလုပ်ရှာတွေ့ !.
ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြော်ငြာကစားရန်အတွက် LED ဖန်သားပြင်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှင့်စျေးကွက်အတွက်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများကမြှင့်တင် ... စာရင်းတွင်ပေါ်တတ်၏။
ထိုအခါငါ 250,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြောင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ
သို့သော်လည်းငါသည်ရှေးဦးစွာ မှစ. အရာရာကိုစတင်ခဲ့သည်မှန်လျှင်, သငျသညျငါလုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်း
ငါရမီ, မယ့်ငါနှောင်းပိုင်းတွင်ငါ၏အစျေးကွက်ထွက်ရှာတွေ့သောအရာကိုအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးစကားပြောပါစေ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ...
အဘယျသို့ပွုခဲ့ ငါသိပ်နောက်ကျငါ့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လေ့လာသင်ယူ? ဝက်ဘ်ဆိုက် positioning ကိုဒါခေါ် SEO ဆိုသည်မှာ။ ဒါနဲ့တဦးတည်းအရာနှင့်တစ်ဦးတည်းသာအရာမှာငါတကယ်အကောင်းပေါ့ဝန်ခံပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ကိုစျေးကွက်အတွက်
အခုတော့ကျွန်မရဲ့ဖောက်သည်က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာ directing နေပါတယ်။
ဒါဟာအားလုံးဆိုက်တည်ရှိသည်, ငါကမှ traffic ကိုဆွဲဆောင်ကြောင့်လူကြိုက်များအောင်နိုင်သည့်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကောင်းဆုံးအပေါင်းတို့၏, ငါကြော်ငြာမပါဘဲကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်တဦးတည်းအရာလုပျနိုငျသောကွောငျ့, ငါအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်မဆိုလိုပါ။ ငါ 2015 အတွက်ကအကြောင်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါနေဆဲငါ့ကိုလှည့်ပတ်အံ့သြဖွယ်သောလူလိုအပ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ငါ့ပထမဦးဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးပြိုကျပြီးနောက်။ ကျွန်မတစ်ဦးမန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ် အမေရိကန်ထံသို့ ဝင်..
ငါထို့နောက်ငါလန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့, အိုင်ယာလန်အတွက်မန်နေဂျာရဲ့ post ကိုရတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏တဦးတည်းအတွက်ငါစျေးကွက်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးရတယ်။
Disneyland နေသူများကဖန်တီးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုရောက်လေ၏။ ငါထို့နောက်သင်ယူ ဘယ်လိုနိုင်ငံတကာကကုမ္ပဏီရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်။
ဥပမာအားဖြင့်, သောအခါငါစတင်ခဲ့ ဒူဘိုင်းဈေးကွက်နဲ့အလုပ်လုပ်, ငါ၏အ mini ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့စတင်.
ထိုအခါငါ 350,000 အကြောင်းကိုရရှိခဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဒီခဲအောက်ပါငါအွန်လိုင်းမှကုမ္ပဏီ built ဒူဘိုင်းအတွက်။ သို့သော်ကိုယ်ကမြှင့်တင်ပေးရန်ဘယ်လိုသိသည်မဟုတ်လော။ ယောဟန်သည်အနောက်ငါ၏အဝန်ဆောင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားသောလူကိုရှာဖွေဖို့စိတ်ကူးနဲ့အတူတက်ရောက်လေ၏။
ငါ LinkedIn အပေါ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ built
ငါစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအကြောင်း6လလောက်ကြာခဲ့သည်။ ထိုအခါ matrix ၏သဘာဝသင်တန်းဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ တိကျတဲ့ငွေရှာဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
ငါကျော်တစ်နှစ်အတွက်အများကြီးပိုက်ဆံစေပြီ။ သင်တို့အပေါ်မှာထိုကဲ့သို့ငွေသားအဘယ်အရာကိုဖြုန်းနိုင်သလဲ စျေးကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်, အားကစားကားများ, နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များ, Quad နှင့်မိသားစုများအတွက် SPA ကုမ္ပဏီအတွက်ပုဂ္ဂလိကရာအရပျ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်များစွာသောစျေးကွက်, စီးပွားရေးမန်နေဂျာမျှပညာရေးရှိသည်နှင့်, ဤပုံမှန်ယေဘုယျမန်နေဂျာမရှိကြပေ။
ကနေအကောင်းဆုံးမန်နေဂျာနှင့်အလုပ်လုပ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့, ဒူဘိုင်း, New York က. ငါသည်အလျင်အမြန်သင်တစ်ဦးပါရမီအသင်းရှိမဟုတ်လျှင်သင်ဘယ်လောက်စမတ်နေပါစေ, သင်ကကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ဘယ်တော့မှသဘောပေါက်လာတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျသန်းပေါင်းများစွာမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မရနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်စျေးကွက်ထဲမှာဧရာမ feat မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ထိုသို့ဆို, မရ 500,000 ဒေါ်လာခက်ခဲသည်, ဒါမှမဟုတ်ပင် 1,500,000 တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကမပါဘဲင်ငွေအတွက်တစ်နှစ် dirhams ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတွေကိုသင်ကူညီခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီး brainpower အတူပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သငျသညျ, လူကောငျးမြားကိုရှေးခယျြပိုမြန်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေကနေဝင်ငွေတွေ့မြင်ယူဆ။
ကောင်းပြီ, အပေါ်ကဘဝသင်ခန်းစာကျွန်မသင်ယူခဲ့ရသည်အခက်ခဲဆုံးသင်ခန်းစာများကိုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါငါသိပ်နောက်ကျကြောင့်လေ့လာသင်ယူ ငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်။
ငါ 18 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်မှာလုပျသငျ့သလဲ
သငျသညျစတင်ခဲ့လျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းမလုပ်ဆောင်မယ်လို့ဒါဟာသိသာပေမယ်သငျသညျငယျလှနျးသို့မဟုတ်ဟောင်းတစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်စတင်ပါအခါ, သငျသညျအမှားတွေလုပ် (တစ်ခါတစ်ရံကြီးမားသော) သင့်ရဲ့စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ခရီးအနည်းငယ်အကြာတွင်။
ကောင်းပြီ, ငါသည်အဦးဆုံးသော9သုံးစွဲသွားမည်ဟု ကြီးထွားလာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများကအမျိုးသားတို့တွင်ငါ၏စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ခရီး၏အနှစ်.
ပထမဦးဆုံးနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ငါ Entrepreneurship နှင့်နည်းပညာကောင်းတစ်ဦးတင်နေတာ၌ငါ့အချိန်ဖြုန်းလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ငါသိပ်အပိုဆောင်းရန်ပုံငွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်ခက်ခဲပြီးဒုံးပျံသင်္ဘောများကဲ့သို့မစတင်ပါဘူးလို့ပဲ။
သင်သာတစ်ဦးအလတ်စားကုမ္ပဏီအတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခု, ကြိုက်နှစ်သက်သို့မဟုတ်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါစတင်ပုံစံသွန်သင် သငျသညျတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အောင်မြင်ခြင်းများအတွက်ရန်ပွဲ။
သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်သုံးစွဲပထမဦးဆုံး3နှစ်ကြာပြီးနောက်, ငါသည်အရာ, အမေရိကန်သို့မဟုတ်လန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးအလတ်စားကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လာမယ့်နှစ်နှစ်သုံးဖြုန်းလိမ့်မယ် ပါတီကဲ့သို့အကအနည်းဆုံး DH 10 သန်းရရှိနှင့်ကြီးထွားလာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်အစိုးရထဲမှာ။
ဤသည်သင်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောကုမ္ပဏီတူအဘယ်အရာကိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်။ ဒါကြောင့်သင်ပထမဦးဆုံးကစားသမားဖြစ်ကုန်အံ့။ ဒါပေမယ့်။ သေချာသည် သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ် ok, အရမ်းညစ်ပတ်နှင့်ခက်ခဲသည်။
ထိုအခါစိတ်ကျရောဂါများအတွက် canola လည်းမရှိ
ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာအဟောင်းများကိုမန်နေဂျာဖြစ်လာနှငျ့သငျရည်မှန်းချက်အတွက်အလွန်မြန်ကြီးထွားလာကြောင့်သင်တို့ကိုဖြိုဖျက်ရန်, ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအချိန်နှင့်ရုန်းကန်လိုအပ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ဆဲဘောဂဗေဒနှင့်တူသောအရာတို့ကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သင်အရောင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တူလူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်သင်ကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေစတင်ရန်ရှိသည်။
လာမယ့်2နှစ်ကြာပြီးနောက်, သင်ကအလတ်စားကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်2နှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်းသင့်တယ်။ ပိုများသောသို့မဟုတ်တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးတရာသန်းဝင်ငွေ, ဒါပေမယ့်ဒီထက်ထက်တစ်ဘီလီယံကို Dirham ထုတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီ, လျော့နည်း။
အလတ်စားကုမ္ပဏီများသည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီမံကိန်းများကို သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီများနှင့်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ ဒါပေမယ့်အဲဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းအတွက်ရောနှောအတွက်ဖြစ်ခြင်းနှစ်အနည်းငယ်ဘို့သင့်ကိုတစ်ဦးနှေးကွေးကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးအောင်ဘယ်လို, နိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ထံမှအရာအားလုံးကိုသင်ယူ ပင်ကြီးတွေရုပ်ပုံလွှာကိုစဉ်းစားရန်။
သူတို့ကအများကြီးတန်ဖိုးရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများ 10% ပိုင်ဆိုင်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းသိသောကြောင့်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီများ, ဥပမာ, ဒူဘိုင်းနှင့်လန်ဒန်, ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာ ယူအေအီးဥပမာ dirhams ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ဥရောပတိုက်တွင် zlotys အများအပြားသန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများ 50% ရှိခြင်းထက်။
နောက်ဆုံးအနှစ် ငါ၏အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘကျွန်မ Manager ကသို့မဟုတ်ဒုတိယသမ္မတများအဖြစ်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်သုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်။ ငါ "ကြီးမားသောကုမ္ပဏီ" ဟုပြောသည့်အခါကျွန်မထက်ပို 10 ဘီလီယံခန့် Dirhams, Orlen နှင့်အလားအလာပင်အများပြည်သူစျေးကွက်နှင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောနေတာနေပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ် 10 နှစ်ကြာအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုလူအများစုထင်သကဲ့သို့ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်သင် Instagram ကိုအပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသော "အောင်မြင်သော" သြဇာ၏စဉ်းစားနိုင်လိုလှပါတယ်။ မကြာခဏသူတို့မှာလည်းသူတို့က, တီဗီတွင်တွေ့မြင်နေကြ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရောင်းဖို့ကြိုးစား.
စျေးကွက်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါအမှတ်
Entrepreneurship, ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့်အ positioning ကို ယူအေအီးအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြီးအကြည့်နဲ့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါမဆိုအခြားအိပ်မက်ထိုသို့ဖလှယ်မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ သင်တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်ထားခဲ့ပါနဲ့ဖြစ်လာမီ, အားလုံးအရွယ်အစား၏ကုမ္ပဏီများမှထံမှသင်ယူကြသည်။
တစ်ဦးက CEO ဖြစ်ခြင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး, သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုသင်ရှိသည်အားလုံးကြောင့်သင်ပြုချင်သောနောက်ဆုံးအရာကြောင့်အသင့်ရဲ့ပျင်းရိခြင်း၏ကျရှုံးခြင်းပါပဲ။
သငျသညျ, အခြားလူရဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ခက်ခဲအခြေအနေများအတွက်အလုပ်လုပ်နေ သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အောင်မြင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ယူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခြင်းလာသောအခါအချို့သောအံ့သြဖွယ် Co-တည်ထောင်သူနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်ပညာရှိတဲ့ option ကိုခဲ့သည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကအားလုံးလုပ်ဖို့သိပ်အချိန်နှင့်မြို့တော်.
စျေးကွက်များနှင့် SEO ဆိုသည်မှာတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ယနေ့ Call နှင့်အခမဲ့ကိုးကားစီစဉ် ငါတို့သည်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောပါလိမ့်မယ်!
ဒေသခံတစ်ဦးကစျေးကွက်အပေါ်ဒူဘိုင်းစီးတီးစာမျက်နှာများ၏ positioning ကို။ ငါတို့ချစ်သော ဒူဘိုင်းရဲ့လူအတော်လေးတိကျတဲ့မွို့၌နေထိုင်နေကြ။ ကောင်းပြီ, လက်တွေ့ကျကျမြို့သားတို့နှစျယောကျဇုန်သို့ပိုင်းခြားလေ၏။ ဒေသခံများ၏ပထမဦးဆုံးဇုန်မီးတပ်မဟာနှင့်ရဲများ၏စစ်ရေးယူနစ်အတွက်ဥပမာ, ဒူဘိုင်းအတွက်ယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတန်အသင့်သာယာဝပြောတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုကုန်ပစ္စည်းနှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ website မှာနေရာချချင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Google တွင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုဦးဆောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖုန်းနံပါတ်မခေါ်လျှင်သင်ကနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်စျေးကွက် - ငါသည်သင်တို့အားဖိုးမြှင့်တင်ကူညီပေးပါမည်sitioning နှင့် SEO ဆိုသည်မှာ in ဒူဘိုင်းမြို့
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပညာရှင်ပီသစွာလက်တွေ့အားလုံးပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးကျော်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ positioning ကိုအတူဆကျဆံ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီသည်ငါတို့အဘို့အတော်လေးကောင်းတစ်မြို့ဖြစ်၏ကျနော်တို့မြက်ထဲမှာပေါ်မယ့်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏။
လောလောဆယ်အသစ်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိပါတယ် ယူအေအီးဈေးကွက်ထဲမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲဥပမာ, အားကစားခန်းမ, မထိုက်မတန်အရက်ဆိုင်များနှင့်အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်။
ဒါ့အပြင်သင်ပထမဦးဆုံးအစာမကျြနှာ hit ချင်ပါတယ်လျှင် ကာတာနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်၌တည်၏။ အဆိုပါပြိုင်ဆိုင်မှုဒါကြီးတွေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်မကြာမီသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုထိပ်တန်း 10 က Google အတွက်သင့်ရဲ့ website မှာနေရာချမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးအဖြစ်လုံးဝပိုကြီးပါလိမ့်မည်။
ကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှကြွလာသောအခါဒူဘိုင်းဟာအလွန်ကောင်းသောစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များမကြာခဏ website တစ်ခုကိုနေရာချခြင်းငှါအဘယ်သို့အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေး အဘူဒါဘီအတွက်ဒေသခံ Arabic အဘိဓါန်အမှတ်အသားပေါ်မှာ။
အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ဥပမာလိမ္မော်ရောင်နှင့် Microsoft အဘို့, ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရုံးခန်းရှိသည်။ ဒါ့အပြင်တည်နေရာအား ယူအေအီး၌သင်တို့၏အမှတ်တံဆိပ် ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပူဇော်ရသောရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဒူဘိုင်းအာရပ်ဈေးကွက်အပေါ်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအောင်မြင်စွာပိုလန်, အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါကုမ္ပဏီများရာပေါင်းများစွာရာထူးတိုး။ ငါတို့သည်လည်းဒူဘိုင်း, အင်္ဂလန်နှင့်လက်တင်အမေရိကတို့အပါအဝင်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အပေါ် operated ။
၏ positioning ဒူဘိုင်း က်ဘ်ဆိုက်များ - ကြှနျုပျတို့ကိုအတူသင်ကထိပ်တန်း 10 က Google အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ positioning ကိုကျေးဇူးတင်စကားထားတဲ့ရန်သင့်က်ဘ်ဆိုက်အတွက် tools တွေကိုတစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၌တည်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားအားဖြင့်သင်တို့ကို websites များအတွက်တကယ့်ပညာရှင်ပီသစွာဖျော်ဖြေ positioning ကိုဝန်ဆောင်မှုရပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီလုပ်ပုံကိုအံ့သြကြသည်မှန်လျှင် Google မှာထိပ်တန်း 10 ပေါ်လာ, သင့်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနေရာချခြင်းငှါငါတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိပြီးအကောင်းဆုံး positioning ကိုကမ်းလှမ်း ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းပိုလန်၌မသာက်ဘ်ဆိုက်များအင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့, United Kingdom နှင့်လည်းဝေးပြည်ပမှာ။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒူဘိုင်း၌သင်တို့အဘို့အ SEO ဆိုသည်မှာပွုနိုငျသနညျး
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအသုံးပြုမှု positioning ကို Duba သာသက်သေပြလုံခြုံနည်းလမ်းများကိုယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲထိုကဲ့သို့သောကို Yahoo, Bing နှင့် Google အဖြစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများပေါ်တွင်တည်နေရာ၌သငျမွငျ့မားရလဒ်များကိုနှင့်အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုအာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလည်းလူမှုမီဒီယာအပေါ်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်၎င်း၏ client များကကူညီဖို့ကြိုးစားနေသည်။
သို့သော်ငြားလည်း, ဒူဘိုင်းကပို client များများအတွက် Maxima ချဲ့ထွင်ဘို့အစိမ်းရောင်အလင်းသစ်စီမံကိန်းများကိုရရှိခဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ကဒေသခံအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်တည်နေရာအတွက်ရုပ်ရှင်ရုံပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့က Google ပေါ်မှာငါတို့ကုမ္ပဏီစစ်ဆေးရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ရုံဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီရိုက်ထည့်ပါနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ positioning ကိုအတွက်အလွန်ကောင်းစွာတွေအများကြီးထွက်ခုန်။
ဥပမာ, အဲဒီလိုတွင်ကျယ်စွာ Naukri ပင်လယ်ကွေ့အပေါ် operated Facebook သို့မဟုတ် LinkedIn တို့နှင့်ပင်တွစ်တာအဖြစ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက် positioning ကို websites များအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အသစ်သောဒီဇိုင်းများကိုလက်ခံရရှိနေ့တိုင်းသင်အနီးဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး Market ကအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့။ သင်တန်း၏, သင်တို့အဘို့ကို Google မြေပုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်သင်၏ website ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူကြသူသည်သင်၏ဖောက်သည်တစ်ဦးအခြေခံကိုအီးမေးလ်အထုပ်ပေးပို့ကူညီပေးပါမည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးတော့အမြတ်အစွန်းကိုရောက်စေဖို့စတင်သည်နှင့်သင်တစ်ဦးခက်အလုပ်ဖြစ်ရန်စဉ်းစားနေကြသောအရာကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲဥပမာအားဖြင့်, ကြော်ငြာတွေစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Facebook ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပင် Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်လေးလည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထုံးစံဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းယောဟန်အနောက်အားဖြင့်များစွာသောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်လုပ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမိတ်ဖက်တစ်ကယ့်ကိုကျယ်ပြန့်အစုစုရှိသည်။ Krakow, Wroclaw နှင့် Poznan အတွက်အခြားသောအရာတို့ကိုများထဲတွင်။
အကြှနျုပျတို့သညျကိုအသင်သည်သင်၏ legionary စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ကိုကူညီမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ယူဆချက်ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့ Hard-အလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောနိုင်ဒါကြောင့်သင်ထားတဲ့အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များအဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့်အသစ်ကုမ္ပဏီများ 30 ကျော်% ဒူဘိုင်းခရိုင်အပြင်ဘက်သူတို့၏ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်။
Marketing ကိုကျောင်း - သင်အွန်လိုင်းငါ့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒူဘိုင်းတစ်ကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးအလားအလာရှိပါတယ်။ Google နှင့် Facebook တွင်အဆိုအရတစ်ပတ်ကာလအတွင်း 150,000 ကျော်ကလူလူမှုရေးကွန်ရက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်မြို့တော်ကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။ အခြားကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့မရှေ့မှာလည်း, ကအင်တာနက်ကိုလွှမ်းမိုးစဉ်းစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။ အတွက်ဒါ ယှဉ်ပြိုင် Sharjah သို့မဟုတ်စီးတီးစင်တာများ၏ခရိုင်ဥပမာကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်မဟုတျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒူဘိုင်းကဈေးကွက်ကိုကျော်ယူနေတုန်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဤ blog ကိုဖတ်ကတည်းက5နှစ်ပေါင်း 10 ရန်အဘို့အ။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပူဇော်ကုမ္ပဏီတွေစျေးကွက်လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။
အတွက်ကုမ္ပဏီ Expand ယူအေအီး ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ!
ဒါကြောင့်မသာဒါခေါ်ဒေသခံများနှင့်သူတို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်မကြာခဏယူအေအီး Arena ၌ယူတဲ့ပွဲသို့မဟုတ်လက်ဝှေ့ရန်ပွဲဒီမှာလာသူတွေကို။
ဒါ့အပြင်အချိန်ကိုရှုထောင့် ဦးချိုကနွားကိုယူပြီးနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကုမ္ပဏီများမှချပြီးတကယ်ကျိုးနပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်နေပါလိမ့်မည်ကြောင်းအဓိကရည်မှန်းချက်ယူအေအီးဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးဦးဆောင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်သင်သည်တည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ စော်ဘွား၌သင်တို့ကိုဥပမာ Arena ဒူဘိုင်းအားကစားစင်တာဘို့, အင်တာနက်ကနေတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်နေရာအများအပြားရှိပါတယ်။ ထို့နောက်မကြာခဏလူငယ်များကျောင်းကိုခရီးစဉ်မှလာဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအတော်လေးအစွမ်းထက်ဆက်သွယ်ရေးအလယ်ဗဟိုသည်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာပြတိုက်ရှိရာမြို့ဘူတာရုံ။
ဒူဘိုင်းပါတီများ၏ positioning ကို - ကိုယ့်ကိုကိုယ်က virtual world ထဲမှာပေါ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ အင်တာနက်သင်၏လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းနှင့်အွန်လိုင်းဖောက်သည်အနိုင်ရတဲ့စတင်ပါ။ ရောင်းအားအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့တိုးပေးရန်။
ဆုံးရှုံးမှု Minimize အတွက် ဒူဘိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်လာ ဒူဘိုင်းအတွက်.
ဒူဘိုင်းစာမျက်နှာများ၏ positioning? - ကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ!
အကြှနျုပျတို့သညျတစျဦးတစျရာရာခိုင်နှုန်းကိုကိုးစားနိုငျသောယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျစကားပြောရန်နှင့်ပိုပြီးထွက်ရှာသို့မဟုတျကြှနျုပျတို့သိထားသင့်သောသူအချို့အထူးမျှော်လင့်ချက်ရှိချင်လျှင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအားရင်းနှီးခင်မင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်ပင်ပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်သင့်အားဖိတျချေါထား။
ကျနော်တို့ကျိန်းသေအားလုံးသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO ဆိုသည်မှာနှင့်စျေးကွက်အဖွဲ့သည် သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်ကျယ်ပြန့်သို့မဟုတ်အခြေခံစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ပါကူညီပေးပါမည်။ ယောဟန်သည်အနောက်အင်တာနက်ကနေ clients များရရှိရန်မည်သို့အပေါ်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းကြော်ငြာအနည်းငယ်ပစ်နေ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းအွန်လိုင်းကြော်ငြာဈေးကွက်ပေါ်မှာ။ တဖန်သင်တို့ဆက်ဆက်သစ်ကိုဖောက်သည်ခံစားပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းအတွက်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့သာကျနော်တို့ငယ်ရွယ်အိုင်တီအထူးကုမဟုတ်သင်တို့ဆီသို့ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်မိသားစုများရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုသိ client များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်။ သင်သည်လက်ျာလက်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီအပ်နှံလိုလျှင်ဒီတော့ကျနော်တို့သိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက် 30 ကျော်လူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
SEO ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ထံမှ? ယနေ့ Call နှင့်အခမဲ့ကိုးကားစီစဉ်!
Google ကစျေးကွက် - - ယောဟန်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်စီမံခန့်ခွဲကျနော်တို့ 2009 အတွက် SEO ဆိုသည်မှာ start!
Google မှာစျေးကွက်! - အဆိုပါဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်ဖွင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ် Google နှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ် SEO ဆိုသည်မှာနှင့်အင်တာနက်စျေးကွက်အကြောင်းကိုလုံးဝဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာလူတွေထင်မြင်ယူဆနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနှင့် ပတ်သက်. SEO ဆိုသည်မှာ၏လဲလှယ်မှုအတွက် positioning ကိုဝဘ်ဆိုဒ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့မှတ်ချက်များ, မေးခွန်းတွေနဲ့သိချင်စိတ်ကိုထည့်သွင်းရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်ငါတို့၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအကြောင်းကိုရေးသားဖို့သွားမည်နည်း။
ဥရောပ, လန်ဒန်, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအပေးအယူအားလုံး Google တွင် positioning ကိုစာမကျြနှာအကြောင်းအဲဒီအရာအားလုံးကိုအကြောင်း။ Google ကမြေပုံထဲမှာစာမကျြနှာပြင်ဆင်ခြင်း, AdWords အစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Paid ။ ကျနော်တို့လူမှုမီဒီယာများ၏ကမ္ဘာမှသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းစကားပြောပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့မှပိုလန်အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏နည်းနည်းရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်နှင့် ဘယ်လိုစျေးကွက် Google မှာအလုပ်လုပ်တယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကု Legionowo အတွက် website တစ်ခုကိုနေရာချခြင်းမှဥပမာဘယ်လို, ဒေသအလိုက်ရိုးရှင်းသောသတင်းအချက်အလက်နှင့် positioning ကို websites များအတွက်ကောင်းစွာ-ကြိုးစားခဲ့နည်းလမ်းများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုသုံးပါလိမ့်မည်နည်း။ နှင့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာနှင့်ဆက်စပ်သော။ အကျဉ်းချုပ်တွင် - ကျနော်တို့အများဆုံးကိုချစ်ဘယ်သို့သောအကြောင်း
သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမည်ကိုမည်သို့အွန်လိုင်းပြည်တွင်းစျေးကွက်ပေါ်နှင့်နိုင်ငံတကာကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်ဖို့အောက်က။ ကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ positioning ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဘယ်လိုအင်တာနက်စျေးကွက်အကျင့်ကိုကျင့်နားလည်ကြလိမ့်မည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် tools တွေကိုသင်အမှန်တကယ် Google တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်သင်၏စွန့်စားမှုစတင်ပါရန်အသုံးပြုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Google ကစျေးကွက် 13 ကွဲပြားခြားနားသောဌာနများသို့ခွဲခြားထားရပါမည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤရမတိုင်မီသို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ဆီသို့ Google ကဖြစ်ပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အဘယ်အရာအကြောင်းကိုနည်းနည်းရေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Google ကမှားအယူအဆရှိနေသော်လည်းဆောင်းပါးများနှင့်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့စျေးကွက်ကိုလည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အပေါ်အဆင့်၏ခြယ်လှယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် Google မှာစင်ကြယ်သောစျေးကွက်အကြောင်းပြောနေတာလျှင်ဒီတော့အဲဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေသောလက်ခံသူများမှလက်ျာဘက်အကြောင်းအရာမြှင့်တင်နေပါတယ်။ ထိုကျနော်တို့က Google စျေးကွက်ခေါ်ပါတယ်။
Google မှာစျေးကွက်လည်း user data ကိုတစ်ဦးစိတ်ဖြာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မည်သို့ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Google Analytics မှသုံးစွဲဖို့။ သင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ရန်။ Google မှာဈေး၏နောက်ပြဿနာကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်သို့လှည့်မှ user data ကိုစုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ် 1 ။ Google Analytics သည်နှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
သငျသညျ Google Analytics နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များအမျိုးမျိုးကနေသင့်ရဲ့ site ကိုမှအသွားအလာစစ်ဆေးစျေးကွက်ကအသုံးပြုမယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြား၏။ Google ကလက်ရှိတွင်သင့် website တွင်လူများ၏အရေအတွက်ကိုစစျဆေးနိုငျတဲ့ tool ကိုပေးသည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကို, အစစ်အမှန်အချိန်တွေထဲမှာကြောင့်, သင်သည် Google ရဲ့ positioning ကိုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေလာသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, တည်နေရာ, လာရောက်လည်ပတ်သူသတင်းရင်းမြစ်, အကြောင်းအရာ, ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်စကားဝိုင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Google Analytics ရန်သင့် website ကိုထည့်သွင်းဖို့သငျသညျကို Google က Gmail ရှိရမည်။ သငျသညျပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏ Google Analytics အကောင့်ကို log နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုထည့်သွင်းဖို့အသစ်တစ်ခုအကောင့်ဖန်တီးပါ။
ကျွန်တော် Google Analytics အတွက်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကို Google Analytics မှ website တွင်တည်ရှိသော code ကို download လုပ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုမှချိတ်ဆက်ရန်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်မိမိတို့၏နေထိုင်အကြောင်းကိုဒေတာရယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
ငါတို့သည် Google Analytics အတွက် get ရလာဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ client ကိုကြှနျုပျတို့၏ website likes လျှင်ကြည့်ဖို့သို့မဟုတ်ပဲကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စွန့်ခွာနိုင်ကြသည်။ Google ကပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖောက်သည်တစ်ဦးတန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်အဖြစ်ကအသိအမှတျပွုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အကြောင်းကိုနေဖို့သင့်ကြောင်းထင်၏။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ Google Analytics ကနေ download လုပ်ပါလိမ့်မယ်သောခြေရာခံခြင်းကုဒ်ကို download လုပ်ပါ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသူကိုလူတိုင်းကခြေရာခံမညျဖွစျကွောငျး, Google Analytics မှကုဒ်ရှိသည်။ အခုတော့သင့်ရဲ့ website မှာဒီကုဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အချိန်ပါပဲ။ အများစုမှာကွန်ရက်ထိန်းသိမ်းသူများ website တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အရာပေါ်မှာပလက်ဖောင်းအဖြစ် WordPress ကိုသုံးပါ။ အဓိကအားဖြင့်အလွန်ကောင်းစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျကျအဆက်မပြတ် updated ကြောင့်။
အမြဲတမ်းလည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကနေအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါသည်, Google ကအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတိရပါ။
ဒီတော့ကျနော်တို့အဓိက WordPress ကို menu ကို click လုပ်ပါ။ သစ်တစ်ခု plugin ကိုထည့်ပါ။ ထိုအခါငါတို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရွေးချယ်ထားသည့် plugins ကိုတစ်ဦးကိုရှာ။
အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်: ExactMetrics အားဖြင့် WP အတွက် Google Analytics မှ Dashboard ကို (ယခင် GADWP)
wordpress ကိုငါတို့သည် install နှင့် plugin ကိုသက်ဝင်စေ
ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင့် plugin ကိုယခု wordpress ကိုအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်သင့်သည်။ မနက်ဖြန်ကနေသင့်ရဲ့ website မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူအပေါင်းတို့ကလူနောက်ကိုလိုက်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
Google Analytics မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်အတိအကျဖောက်သည်သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာလာဘယ်မှာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကသေချာပေါက် Google ထံမှဖြစ်ရန်မလိုပါ, သူတို့ကတခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကနေဒါမှမဟုတ်ဒါခေါ်တိုက်ရိုက်ရင်းမြစ်များမှနိုင်ပါတယ်ဥပမာအီးမေးလ်စျေးကွက်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၌မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်ကိုရေးသားခဲ့သည်များနှင့်တိုက်ရိုက် link ကိုဝင်ကြ၏။
Google ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်အမှတ်2စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ
ဒါကြောင့်သင်ကလူတွေကိုသင့်ရဲ့ website မှာရိုက်ထည့်ပါနဲ့ချန်ထားမည်မည်မျှကိုခြေရာခံနိုင်ကြသည်။ ယခုငါတို့သင့်ကုမ္ပဏီအဘို့အညာဘက်ကိုစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များအားပူဇော်အဘယ်အရာန်ဆောင်မှုကိုသင်ရောင်းသောအရာကိုအပေါ်မူတည်သို့မဟုတ်။ သင်, တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ကနေအွန်လိုင်းကြော်ငြာ, လူမှုရေးမီဒီယာသို့မဟုတ်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အစဉ်အဆက် created အကောင်းဆုံးစျေးကွက်မဟာဗျူဟာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အခြားကုမ္ပဏီများထက်ပိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ရှိသည်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်၏ထုတ်ကုန်ရှိသည်ရင်တောင် Google ကသိပါလိမ့်မယ်တကယ်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်လူပေါင်းစာပိုဒ်တိုများပေါ်တွင် အခြေခံ. ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ကုမ္ပဏီရှာဖွေမည်။ အကြောင်းမူကား, ငါကုမ္ပဏီထံမှကားတစ်စီးဝယ်နှင့်မည်သို့ပြန်ဒီကုမ္ပဏီမှကားကိုပြန်သွားပါ။ ဒါဟာပြီးသားအရာတစ်ခုခုကိုသင့်ကုမ္ပဏီမှားကြောင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အချက်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဧ Muska ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ: တက်စလာတည်ဆောက်ရန်သူဟာမာစီဒီး CLS ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသုတ်သင်
ဒါကြောင့်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တိုးတက်အောင်အကြောင်းကိုအလွန်အလေးအနက်ထားစဉ်းစားကြည့်ပါမြှင့်တင်မစတင်မီ။ ကြှနျုပျ၏ကုမ်ပဏီ, ထိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မဆိုပြဿနာနှင့်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံဖြေရှင်းနိုင်မတတျနိုငျသောအမှန်စင်စစ်ပေါ်မှာလှဲ။ သင်ကအရမ်းအစအဦးမှာသံသယအဖြစ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအများကြီးမပေးခဲ့ပါဘူး။ စူပါစျေးကွက်အရာအားလုံးကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းထုတ်ကုန်စို့။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်အရေအတွက်ကိုကအခြား search engine ကိုကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနေစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ထိုကုမ္ပဏီများ၏ Google မှာပိုမိုမြင့်မားသွား၏။
ဒါ့အပြင် Google ၏ထုတ်ကုန်စုစည်းတင်ပြရန်စျေးကွက်အပေါ် product အဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါစတော့အိတ်ချိန်းအဖြစ်တာအဖြစ် Google ကိုစဉ်းစားပါ။ ကုမ္ပဏီဖွင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတင်နှင့်ဒါခေါ်စတင်တက်ဖွံ့ဖြိုးသော Warsaw ကိုစတော့အိတ်ချိန်းဝင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့မှာအလေးသာ 1-1000000 ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီလို Uber နှင့် dropbox အဖြစ်အလွန်အထူးထုတ်ကုန်ရှိသည်ကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်, လက်တွေ့ကျကျအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်ကုမ္ပဏီများရှိကြ၏။ ၏သင်တန်း, ဒီကုမ္ပဏီအလွန်လျင်မြန်စွာယင်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတွေ့နှင့် Google နည်းတူလျင်မြန်စွာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်ပထမဦးဆုံးစာမကျြနှာတစျခုကိုပေးတော်မူ၏။
Google တွင် Nr.3 စျေးကွက်အကြောင်းအရာ
Google မှာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ကယ့်အလားအလာဖောက်သည်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်လေ့လာခဲ့သူပျမ်းမျှအားလူတစ်ဦးအဘို့အညာဘက်ဆောင်းပါးများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူအများစုဟာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြာတွင်အမှန်တကယ်ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာပေါ်မှာဤစာသားကိုတင်ထားတော်မူမည်ဖြစ်သောအင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အောက်တွင်ပုံမှန်အားစာသားများရေးသားခြင်းကြောင်းထင်ပါတယ်။ တကယ့်ကနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏သင်တန်း, ဒီဟာမှားယွင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပေးထားသောခေါင်းစဉ်အပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနှင့်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ယခင်ကဆိုအင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့မဟုတ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်သွင်းရသေးတဲ့ခေါင်းစဉ်စစ်ဆေးနေသည်။ ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်သည်လူတစ်ဦးအတွက်ရေးဖို့သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီအွန်လိုင်းကဆက်ပြောသည်ခဲ့ပြီးမတိုင်မီအပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးကြောင်းထူးခြားတဲ့စာသားကိုဖြစ်ရမည်။ အလွန်မကြာခဏအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Forbes ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်အသုံးပြုသည်။
လောလောဆယ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတုထောက်လှမ်းရေးကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ဘယ်လုနီးပါးတိုင်းစာသားကို check လုပ်ပေးပါတယ်နှင့်လူ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်နားလည်မှုများ၏အဆင့်မှာဖတ်ခြင်းနှင့်နားလည်ရန်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်သည်ကောင်းသောအကြောင်းအရာတိုထိုသို့လက်တွေ့နေဆဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအတော်လေးရေပန်းစားသည်ပါဘူးကြောင်းကိုသင်၏ website ကိုတည်ဆောက်ချင်ပါတယ်လျှင်ပင်။
အွန်လိုင်းစျေးကွက်မှာတော့ content တွေကိုကဲ့သို့သောကြေညာချက်ဘုရင်ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိပိုလန်, အကြောင်းအရာစိုးစံပါတယ်။ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိသည်သောအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏လက်ခံသူများများအတွက်တတ်နိုင်သမျှလက်တွေ့ကျကျအကောင်းဆုံးကိုအကြောင်းအရာရှိသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို၏သင်တန်းကောင်းကောင်း-တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်ကောင်းစွာ-လက်ခံရရှိသောလက်ခံသူများအားဖြင့်၎င်း, ငါရှာဖွေနေငါဝက်ဘ်ဆိုက်၏အလားအလာဧည့်သည်ဖြစ်သောပေါ်တွင်ဘာသာရပ်အပေါ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ဝီကီပီးဒီးယားအလွန်ကောင်းစွာအင်တာနက်ပေါ်မှာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့သည်သင်တို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရေးသားဖို့မစတင်မီသင်အာရုံစိုက်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ဤခေါင်းစဉ်တီထွင်ထားသော pinecone အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဘို့အကြည့်ဖို့ဖြစ်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုဖော်ပြလျက်ရှိသည်။
ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များဥပမာ - ပိုလန် WordPress ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအားကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောလိပ်စာအောက်မှာလည်ပတ်သင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဘလော့ဂ်များသင်တန်းအလွန်မကြာခဏ updated နှင့်တခါတရံစာသား၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမကြာခဏအင်တာနက်နှင်ထုတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ခေတ်မမီတော့သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြပြီးကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများသူတို့ထုတ်ဝေရန်အကြောင်းအရာအာရုံစိုက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Peronal ဘလော့ဂ်များ - ဤသည်သင်၏အသက်တာ၌ရပျကိုလုယူသောဖြစ်ရပ်များ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်, ဥပမာအားဖြင့်, ပြည်ပမှာ trips သို့မဟုတ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကို။ အများသောဘလော့ဂါဥပမာ, YouTube ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုများစေခြင်းနှင့်ဤ blog မှထည့်ပါ။
အွန်လိုင်းကျူတိုရီရယ် - အကြောင်းအရာအလွန်နီးကပ်စွာကမ်းလှမ်းထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော။ Allegro သို့မဟုတ် OlX အပေါ်ဝယ်လက်များအတွက်မကြာခဏအကြံဉာဏ်ကို။ ဒီတော့ဒီသင်ချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်ကားပြုပြင်အကြောင်းကိုဥပမာ, သင့်လက်ခံသူများမှပေးနိုငျသောအလွန်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုဆောင်ကြဉ်းနှင့်စာရေးဆရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုသည်အဘယ်အရာကိုအကြီးအသေးစိတျကိုဖော်ပြရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအလွန်ကောင်းစွာအကြောင်းအရာတည်နေရာနေကြသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါပြီသူတွေကိုကရေးသားဆောင်းပါးများ - ကျွမ်းကျင်သူများကရေးသားအကြောင်းအရာ။ ဤရွေ့ကား contents တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့် check လုပ်ထားနှင့်အလွန်မကြာခဏယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အတည်ပြုထားသောအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသာသတင်းအချက်အလက်များသာရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစိုးရသတင်းအချက်အလက်က်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသံရုံးများ။ ဤရွေ့ကားအလွန်မကြာခဏပြီးသားပေးထားသောခေါင်းစဉ်ကိုဖော်ပြရန်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့အတိမ်အနက်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားဆုံးနှင့်ကိစ္စများတွင်ပါကယုံကြည်စိတ်ချရသောကိုးကားနှင့်အတူပေးထားသောလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
အင်တာနက်ကိုအင်တာဗျူး - အလွန်မကြာခဏဤအင်တာနက်အပေါ်ရာထူးတိုးအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်ကုမ္ပဏီမှကြွလာသောအခါဤအရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်မကြာခဏဥပမာ, Kim Kardashian ကတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်ကြီးသို့မဟုတ်ဥပမာ, redbull အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်အားကစားကြယ်ပွန်ထမ်း။ တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏တင်ဆက်မှုနာမည်ကြီးများနှင့်လူသိများလူများ, ဥပမာမိုက်ကရိုဆော့ဖသို့မဟုတ် Apple က၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အင်တာဗျူးတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေ။
အင်တာနက်ကို podcasts များ - podcasts များရေးထားလျက်ရှိ၏စျေးကွက်များ၏ content ပိုင်ကြပါဘူး။ သို့သျောလညျးအရမျးကိုမကြာခဏရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်မှုလုပ်ငန်း, ဥပမာ, YouTube တစ်ခုသို့မဟုတ်တီဗီလူအလွန်ကောင်းစွာသိသူကလူအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်ဟု podcasts တွေကိုအာရုံစိုက်။ သို့သော် Podcast တခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နိုင်ပြီးအလွန်မကြာခဏ web ပေါ်မှာ podcasts တွေကို post သူတွေကိုဘာသာစကားမြားစှာဘာသာပြန်ချက်ထည့်ပါ, ဒါကြောင့်ဒီစာဖြင့်ရေးသားစျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်အပေါ်သုံးသပ်ချက်များ - Google တွင်အထိရောက်ဆုံး။ သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်နှင့်စမ်းသပ်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘလော့ဂါများအားဖြင့်။ အလွန်မကြာခဏကံမကောင်း, ဒီစစ်မှန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီအများအပြားကကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုသစ္စာကိုဖျက်သတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ employ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကကံမကောင်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့အားလုံးကာလဖြစ်၏။ သင်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေးထားသောဆောင်းပါးသို့မဟုတ်ပေးထားသော Podcast တခုကိုများ၏အခွင့်အာဏာမှကြွလာသောအခါအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, Business Insider Polska ကဲ့သို့ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများ။ ပိုလနျဘဏ်အတုကိုးကားဖို့သူ့ဟာသူမြင်အောင်မပြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုရေးသားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပါကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူစစ်ဆေးနေရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် - အွန်လိုင်းစတိုးများတွင်ဥပမာထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုကျမ်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သော WooCommerce ပိုလန်အဖြစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ဝိသေသနေသောကုန်ပစ္စည်းကဒ်ပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောသော parameters တွေကိုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ, ဖြည့်စွတ်။
Google ကမြေပုံပေါ်တွင်သုံးသပ်ချက်များ - ပစ္စုပ္ပန်မှာ Google ကပိုလန်အတွက် Google ကကြှနျုပျ၏စီးပွားရေးကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ဒီ tool ကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျနော်တို့ပြည်တွင်းစျေးကွက်အပေါ်လုပ်ငန်းများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးနိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုနည်းနည်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ဖြစ်ကြပြီးအင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အစစ်အမှန်အသုံးပြုသူများကပေးထားသောကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုပြောတိုင်း။ တစ်ဦးကအလွန်မြန်ဆန်စွာပိုလန်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး tool ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။
အမှတ်4။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Advertising ကြော်ငြာ
ဒါကြောင့်လူအများစုကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာရုံ AdWords အကြောင်းစဉ်းစားပါ။ အွန်လိုင်းကြော်ငြာထုတ်ကုန်မြှင့်တင်တဲ့ဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်အယူအဆကိုကြောင့်၏သင်တန်း, ဒီတစ်ဦးအထငျမှားဖြစ်ပါတယ်။
ကြော်ငြာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျနှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံးအခမဲ့ကြော်ငြာကြလိမ့်မည်။ ဤကဏ္ဍတွင်ဥပမာ, ကျနော်တို့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ဘလော့ဂ်စဉ်းစားပါ။ ဥပမာ, ဘလော့ဂါ YouTube ပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကိုဖန်ဆင်းနှင့်သင်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒီကဆက်ပြောသည်နှင့်သင့် link ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်စက်ကနေအခမဲ့ကြော်ငြာရ။ မကြာခဏအခမဲ့ကြော်ငြာကိုလည်းသင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ website ကနေသတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အများစုဥပမာရောင်းချရန်စက်ဘီးကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီကဤစက်ဘီးမော်ဒယ်များဘို့စိတျအပိုငျးပေးထားပါတယ်။
သင်သည်သူတို့၏စက်ဘီးအဘို့ဤအပိုပစ္စည်းရနိုင်ဘယ်မှာသင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် add ပါလိမ့်မယ်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ညှနျကွားထဲမှာသူတို့ရဲ့ website ကနေအခမဲ့ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။
ကြော်ငြာ၏ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း paid ကြော်ငြာဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမိမိတို့အ client များအတွက်ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်အောင်အခြားကုမ္ပဏီများစျေးကွက်များကိုကြော်ငြာဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Facebook က OLX ပို့စ်များကိုသင်တို့၏န်ဆောင်မှုများနဖူးစည်းစာတမ်းတွေကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏အားပေးအားမြှောက်။ linkedin ဒီထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားနေသောဖောက်သည်များ၏ပေးထားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထံသို့စေလွှတ်နိုင်တိုက်ရိုက်ကြော်ငြာတွေဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Twitter ကိုဥပမာအိန္ဒိယသို့မဟုတ်အမေရိကအဘို့, ပေးထားသောဒေသအဘို့ကြော်ငြာပါဘူး။ Paid ကြော်ငြာတွေကယ့်ကိုသင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်မည်မျှလူကွာခြား။ ဥပမာအားဖြင့်, Pop-up သို့မဟုတ်ခွဲများကို manual ဒါခေါ်။ သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်လက်ခံသင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုအတွက်အခြားကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်သောသူအပေါင်းတို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြော်ငြာ paid ဟုခေါ်သည်။
ဒါကြောင့်နိဂုံးချုပ်အတွက်ကြောင့်ပေးဆောင်ကြော်ငြာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်ပါသနည်း။ ဒါဟာသင်ရောင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စျေးနှုန်းသင်ဤထုတ်ကုန်များအတွက်အဆိုပြုသောအရာကိုထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ သူမသည်လည်းသင်တို့ကိုအတိုင်းဤစျေးကွက်အပေါ်တူညီတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်မည်သို့ကြီးတွေနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုလည်းမရှိဆိုရင်နောက်ပြဿနာသင်တန်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြော်ငြာပေးဆောင်ခြင်းနှင့်တရားရုံးကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီများမှလျှင်ကြီးမားသောရလာဒ်များမပေးပါဘူးလို့ပဲ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ဥပမာ Facebook သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကစျေးကွက်အဘို့, အခြားစျေးကွက်လမ်းကြောင်းများပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အကြံပြုလိမ့်မယ်။ လျှင်သောကြောင့်ပေးထားသောကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ site ကိုအလွန်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်နှင့်သင့်ထုတ်ကုန်မဆိုစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသွားလိမ့်မည်ကြောင်းလစဉ်လတိုင်းကို AdWords အတွက် PLN 100,000 ကျော်ဆို, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သင့်ထုတ်ကုန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်, ဖောက်သည်များနေတုန်းပဲသငျသညျယဇျပူဇျောဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ရှိသည်။ နှင့်တစ်ဦးအလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်အတွက်ကံမကောင်းပါကအတော်လေးလေးလံဖြစ်ပါတယ်။
Nr.5 ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ E-commerce
ဖောက်သည်ရောက်ရှိဖို့ E-commerce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ၏လက်၌ပြုလုပ်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုသတိပေးမှုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ e-commerce ကိုအလွန်အဆင့်မြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဥပမာအားဖြင့်, ဖျက်သိမ်းလှည်း - ဖောက်သည်သင့်ရဲ့ website မှာဝင်နှင့်လှည်းဖို့တစ်ခုခုဖြည့်စွက်ပါလျှင်ဆိုလိုသတည်း။ ဤသည်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုအခမဲ့မည့်စနစ်ကအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ဖောက်သည်ငါသူပြီးသားဆက်ပြောသည်ထားပြီးသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးတစ်ဦးငွေပေးချေမှုစေသောထုတ်ကုန်အတူပြန်လာအီးမေးလ်ကိုရရှိသွားတဲ့အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက် add နှင့်ထွက်ပေါက်ဝင်သော။
ဒီအတိုင်းစျေးကွက်အပေါ်နီးပါး 90% အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ E-commerce နဲ့သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီများတွင်အသုံးပြုနိုင်အများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဥပမာ, စျေးဝယ်စာရင်းဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်နောက်ပိုင်းမှာသုံးနိုငျအသစ်တစ်ခုစျေးဝယ်စာရင်းကကိုဖန်ဆင်း၏။ လူတိုင်းသိတယ်သကဲ့သို့, တစ်ရက်သာ 24 နာရီရှိပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအများစုဟာအလွန်ကောင်းစွာကလုပ်ပါ။ နှင့်တာဝန်များအများကြီးလူအများစုကယ့်ကိုသငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုဝယ်ချင်နှင့်သင့်ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူသည့်အခါတစ်စုံတစ်ဦးကိုဥပမာသူ့ကိုခေါ်တော်မူလျှင်ပင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုသတိပေးချက်များလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါဟာသင်ကိုသင်အားရင်းနှီးခင်မင်စွာအနာဂတျမှာဝယ်ယူရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်ငွေပေးချေမှုကိုထည့်သွင်းဖို့မေ့လျော့နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်သတင်းအချက်အလက်မင်္ဂလာပါပြီးနောက်စက်ကနေပို့ပေးရန်ကျိုးနပ်သည်။
ဒါဟာအစကောင်းသောစျေးကွက်တစ်ခုပုံစံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်၏ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကအင်တာနက်ကနေ client ကိုရပြီးတော့ကျနော်တို့တည်ရှိကြောင်းသူ့ကိုသတိပေးရန်ရှိသည်မီ။ အလွန်မကြာခဏကုမ္ပဏီအများအပြားထိုကဲ့သို့သောသတိပေးချက်များကိုသုံးပါ, ဥပမာ, pracuj.pl ။
No..6 ။ E-mail ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ဤသည်နေဆဲကာလအစဉ်အမြဲအင်တာနက်အပေါ် created အင်တာနက်စျေးကွက်၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာမပိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတကယ်မတည်ရှိပါဘူး, လူတွေဒါပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကနေ e-mail ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်မထင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့အားလုံးအီးမေးလ်စျေးကွက်နေဆဲနံပါတ်တစ်ကြောင်းပိုလန်အတွက်စျေးကွက်လည်ပတ်တဲ့သူစျေးကွက်အဖြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို happend ပါဘူး ?. လူအများစုဟာတကယ်အင်တာနက်ပေါ်မှသတင်းအချက်အလက်များစစ်ဆေးတီဗီကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ကလေးများနှင့်အတူထိုင်ဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူး။ နှင့်ရုတ်တရက်ကျွန်မအချို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလာတော်မူကြောင်းကိုငါ့ကိုအကြောင်းကြားက e-mail ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိသည်။
အီးမေးလ်ဖြင့်ကြော်ငြာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဖန်တီးရန်မည်သို့အွန်လိုင်းကိုကြည့်ပါ။ အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်သင်တန်း၏, အလွန်ကောင်းစွာအီးမေးလ်စျေးကွက်ပို့ပေးနှင့်ဤအစီအစဉ်မှ e-mail ကိုလက်ခံရရှိသူက client များအမြဲမဟုတ် spam များကိုရန်စာတိုက်ပုံးရသော mailchimp ကျနော်တို့သင်ဤအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်အီးမေးလ်စာပုံးကို configure ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီ, သင်တန်း, တစ်လလျှင်နှစ်ထောင်အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းအခမဲ့ပေးထားပါတယ်။
ပျမ်းမျှ Kowalski ဖုန်းပေါ်တွင်ကြော်ငြာပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်သော။ ထိုအလျှင်အီးမေးလ်စျေးကွက်၏ပုံစံအတွက်ကြော်ငြာတယ်သောဤ website တွင်ယခင်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်များ မှစ. , ကစေလွှတ်တော်မူသောကုမ္ပဏီဖောက်သည်ဖြစ်ကောင်းဒီကုမ္ပဏီကိုကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များတွင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြောင်းသိတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်ဖောက်သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတွက်လာလိမ့်မည်ဟုသူကနည်းနည်းမဝယ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကငါ့အအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်သူအနုတ် 20% တစ်ဦးလျှော့စျေးမှာဥပမာအားဖြင့်နောက်တဖန်တစ်က e-mail ကိုရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါကစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ်ယခုငါကငါရိုက်ထည့်ပါဝယ်ဖို့ချေသည့် diskant တယ်ကိုမြင်လျှင် nice ထုတ်ကုန်, ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကျေးဇူးပြုကိုဝယ်ကြလော့။
ဤသည်ကိုအီးမေးလ်စျေးကွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်အိုင်တီအထူးကုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားပြီးတဲ့စူပါထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ငါတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အသက်တာ၌ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မကျွန်တော်တို့ဆီကကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူတော်မူသောငါတို့၏လက်ခံရရှိသူဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖတ်ရှုဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလို့ပဲ။ သာစက်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစတိုးကနေအသစ်တခုကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အီးမေးလ်တစ်စောင်ရရှိသွားတဲ့။ စက်တောင်းမှကျနော်တို့ကမေးလ်ထဲမှာသူ့ကိုစေလွှတ်သောထုတ်ကုန်ကထပ်ပြောသည်။ နှင့်အီးမေးလ်ကိုအကြှနျုပျတို့သညျကပေးပို့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားစဉ်ကတည်းကရဲ့တဆယ်စက္ကန့်ပြောပါရစေ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်ဖောက်သည်မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လာနိုင်မ content တွေကိုစျေးကွက်ကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ဟာအကြာတွင်ရောင်းချချင်သောထုတ်ကုန်ရှိသည်, ကြှနျုပျတို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရှိသည်သောအခြားတိုးတက်လာသောထုတ်ကုန်ရှိသည်။ ငါတို့သည်တကယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီပေးသည်ဘယ်အရာကိုနောက်ကျောကဒီ client ကိုမှအကြိမ်ပေါင်းများစွာလာကြ၏။ ကောင်းပြီ, သင်သိအဖြစ်။ ဖောက်သည်ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ကိုမြင်လျှင်လျှင်။ ဒါဟာသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website အကြောင်းဖတ်ရသောအခါလာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထက်ဒီထုတ်ကုန်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ အလွန်မကြာခဏသင် Adidas သို့မဟုတ် Nike က website တွင်မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒေသခံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့သင်အမှန်တကယ်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ website မှာထည့်သွင်းဖို့ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်တွင်သင်အခမဲ့အဘို့သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်ပေါ်တွင်သင်၏အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ 30 ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုနိုင်ငံခြားပါတီများဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်သင်နိုင်ငံခြားဝဘ်ဆိုဒ်များရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ပြောသည်ပြီ Google ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, ယူအေအီးအတွက်ဖောက်သည်ဥစ္စာတိုးပွားစေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ရိုးရှင်းစွာဒူဘိုင်းအတွက်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသဥပမာကော်ဇောသန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်၏ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင်ဤ website ပေါ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်လိုသည်။
သငျသညျပြီးသားကို Google မြေပုံကိုဖန်တီးနေတာပါ။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာ Google က search အတွက်သင့်တည်နေရာကိုနေရာချခြင်းမှအကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အခြားမည်သည့်ခံဝန်နဲ့တူပါကအချိန်အများကြီးကြာပါသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် website ကိုနေရာချဒါပေမယ့်လည်းဒေသအလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရာချခြင်းမှသင့်ရဲ့မြေပုံကိုထည့်နိုင်သည်သာမကအောက်တွင် link ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်ဥပမာအောက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်းထည့်ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအင်တာနက်ကိုအဆင့်မြင့်သွားလိမ့်မည်သည့်သင့်ရဲ့ website နှင့်အတူမြေပုံထည့်နိုင်သည်သာမကဘယ်မှာလင့်များဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်ဒါ့အပြင် Google ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒေသအလိုက်ထိုကဲ့သို့သော Wirtualna Polska သို့မဟုတ် Onet အဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှသင့်ကုမ္ပဏီဖြည့်စွက်။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏တည်နေရာသို့မဟုတ်လက်လှမ်းမမီတိုးပွါးစေတော်မူသောသင်တို့အမိနှင့်သင့်ရဲ့ website မှ link တစ်ခုထည့်သွင်းဖို့ဘလော့ဂါများကိုမေးပါ။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်အမှန်တကယ် Google ကစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Google နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်အပေါ် Nr.6 စျေးကွက်
mobile devices များနှင့်တယ်လီဖုန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်း၏အတော်လေးခက်ခဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကမှသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ဖို့အတွက်သင်အမှန်တကယ်အများအပြားအချက်များပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ရန်ရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများသည် '' ဖုန်းများကြောင့်ကြော်ငြာများနှင့်ချဲ့ကားမနိုင်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမယ်, ကံမကောင်းသူတို့စူပါကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုတက် pop နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဤဒါခေါ်တဲ့ pop-ups များမှာတစ်ဦးကလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြော်ငြာတွေထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား Patel က tool ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဖောက်သည်သတိပေးတဲ့အကြီးအလွတ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
subscribers သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. သင့် client သတိပေးတဲ့အကြီးအကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုခေါ်ဒါခေါ်တယ်လီဖုန်းအကြောင်းကြားစာများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်မပြီးသားသင့်ရဲ့ website မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပေမယ့်သင်တို့ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မသတိပေးရနိုင်သူကိုဖောက်သည်များစွာရောက်ရှိနိုင်ပါ၏။
သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကလစ်နှိပ်ဖို့အတွက် log ဖြစ်ပါသည်စက်ထဲကနေငါစေလွှတ်သောနေ့ရက်ကာလကိုများစွာမဆိုအချိန်မရွေးသူတို့ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသူတို့ကိုသတင်းအချက်အလက်ပို့ပေးသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဤအသွားအလာတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုသင့်ရဲ့ website တွင်ဤလျှောက်လွှာကို install လုပ်ပါအကြံပြုပါသည်။ သင့် client ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြန်လာပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်အသစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့်သင်တိုက်ရိုက်ရှိသမျှသည်အခြားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး channel များကိုကျော်လွှားကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြသည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုမျှဝေချင်ပါတယ်လိမ့်မယ်မသာ။
Nr7 SEM - သော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်း
EACTIVE သူသည်ဤဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်ကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ရေးသားခဲ့သည်။ ဤတွင်လက်တွေ့အကြောင်းကိုအရာအားလုံးရှင်းပြပြီးဘယ်လို SEO ဆိုသည်မှာနှင့်မည်သို့ဒီ tool ကိုအသုံးပြုဖို့မှမတူဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်, ကျွန်တော်တို့ဟာဒါခေါ်သော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေဘယ်လိုသာအနည်းငယ်သေးစိတျကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ အခါ Google မှာရာထူးထံသို့မရောက်ရ။ ကျနော်တို့ကအမြဲအရေးကြီးဆုံးကျနော်တို့ကိုတိုက်ရာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ကြောင်းသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပါဘူး, ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်အပေါ် operating ပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူရေတွက်ပြီးမှရှိသည်, ကံမကောင်း, ကျွန်တော်တို့ထက်မလွန်။
ကျနော်တို့မှာအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်တွင်တည်ရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုပါကဒါဘယ်လိုကယ့်ကိုစစျဆေးဖို့။ ကျနော်တို့ဝဘ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထဲမှာပေါ်လာချင်ပါတယ်ကြောင်းသော့ချက်စာပိုဒ်တိုများစစ်ဆေးနေများအတွက်အကောင်းဆုံး tool ကိုလက်ရှိ Ubersuggest Neil Patel ကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့သည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူကအင်တာနက်စျေးကွက်၏ပထမဦးဆုံးဟက်ကာဖြစ်ပါတယ်။ သူကအကြီးဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် America မှာ website တစ်ခု positioning ကို system ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်သူသည်ထိုကဲ့သို့သောကို Yahoo နှင့် Google အဖြစ်အဓိကကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်း။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လည်းတကယ်ကောင်းစွာလုပ် keyword ကိုရှာဖွေရေးစနစ်။
နီးလ် Patel ကအားဖြင့် Ubersuggest
သငျသညျအဓိကသော့ချက်စာပိုဒ်တိုများရှာဖွေတဲ့အခါမှာပိုလန်ရွေးချယ်ဖို့သတိရပေးပါ။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့သင်ဖောက်သည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေသံသယတဲ့ keyword ကိုထားသောစာပိုဒ်တိုများရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခယျြပွီးနောကျ, ပေးထားသောထားသောစာပိုဒ်တိုများများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကသင်၏က်ဘ်ဆိုက်၏ positioning ကိုကာလအတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သို့ခက်ခဲကြည့်ပါ။ ၏သင်တန်းမှာလည်းဤအစီအစဉ်အတွက်သင်က Google အပေါ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောရာထူးများအတွက်စစ်တိုက်ပါမည်ဟုအဘယ်သူကိုနှင့်သင်၏ပြိုင်ဖက်များနှင့်ကုမ္ပဏီများကမြင်နိုင်ပါသည်။
KWFinder - သော့ချက်စာပိုဒ်တိုများများအတွက် Professional ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်နောက်တစ်နေ့ tool ကို KWFinder ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတကယ်တကယ်အဆင့်မြင့်စာပိုဒ်တိုများများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရှာဖွေရေးမှာကြည့်ဖို့စျေးကွက်ကူညီပေးသည်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြေခံဗားရှင်းမှကြွလာသောအခါထိုအနှစ်ဦးစလုံးသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်အဆင့်မြင့်စာပိုဒ်တိုများ, ဒါခေါ် Long ကသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။ KWFinder သင်သည်သင်၏ positioning ကိုနှင့် SEO ဆိုသည်မှာခရီးတွင်စတင်ချင်ပါတယ်ညာဘက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများရှာပိုကောင်းတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
သငျသညျကို Google အတွက်စျေးကွက်စတင်နိုင်ရန်လိုလျှင်ဒီတော့သင်တကယ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာနှစ်ခု tools တွေကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
Nr.8 SEO ဆိုသည်မှာ - အခမဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို
ယခုဤဆောင်းပါးဖတ်သောလူတစ်ဦးသည်ငါ့ကိုသူ့ကို Google ၏ပထမဦးဆုံးအစာမကျြနှာပျေါတှငျအထဲကခုန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုဒီမှော် key ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရသောယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားသောစာသားမဟုတ်ဘူး, သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်သည့်သော့ချက်ပါပဲ။ ယခုဤဆောင်းပါးကိုသင်နီးပါးစာစောင်ကိုနှင့်စာစောင်ကိုတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားငါတို့ဆောင်းပါးအပေါ်ကိုပင်ရှုပါ။ အဘယ်ကြောင့် Google ကစက်ရုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးလာကကိုယျ့ကိုယျကိုနေရာချချင်ပါတယ်ရာမှအဓိကသော့ချက်စာပိုဒ်တိုများ၏ညာဘက်အရေအတွက်ကိုရှိကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဤဆောင်းပါးကိုအဘို့ကျနော်တို့က Google အပေါ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ကယ့်ကိုအင်တာနက်ဘရောက်ဇာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖောက်သည်များ၏အံ့သြဖွယ်ပမာဏပေးသောတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အများစုစာဖတ်သူတွေကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ထိုသူတို့အဘို့ရေးထားသတိရဖို့လိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Google သည်အောက်တွင်ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သည်ဘူး။ ကျနော်တို့ကအမြဲဖတ်နေရကျိုးနပ်ဆောင်းပါးများနှင့်နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်ရေးဖို့ကြိုးစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးအတော်များများဟာ Facebook ပေါ်မှာ 1,000 ကြိမ်ကျော်ကြားဖြတ်ပါပြီ။ ဒီဆောင်းပါးတွေ, သင်တန်း, အားလုံး 3000 ဇာတ်ကောင်ကျော်ရှိသည်။ သူတို့ဟာရှာဖွေမှုများကိုတစ်ပတ်လျှင် 10 အမြင်များန်းကျင်အကြမ်းဖျင်းခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာတကယ်မိုးသည်းထန်စွာစကားဝှက်တွေအတွက်ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း 3,000 ကို Google ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးက) Long ကစာသား
ခ) Worth စစ်ဌာနချုပ် Next ကို၏စာသား
ဒါဟာအမြဲသင်တစ်ဦးကို web browser ၏ရှုထောင့်ကနေအင်တာနက်အပေါ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကြည့်တာကျိုးနပ်သည်။ အိုကေ, သငျသညျကြော်ငြာများအတွက်ပေးဆောင်ချင်ကြပါဘူးနှင့်သင့်ဘ်ဆိုဒ်အသစ်ဖောက်သည်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ပေါ်မှာပိုက်ဆံဖြုန်းချင်ကြပါဘူးလျှင်။ သငျသညျထို site ပေါ်တွင်တကယ်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုရှိရမည်။ ဒီတော့ရှည်, ရိုးရိုးသားသား, ပြည့်စုံစေ့စပ်စာသားလှည့်ကွက်လုပျသငျ့သညျ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုရေးသူအများစုမှာစျေးကွက် 2000 ဇာတ်ကောင်ထက်တိုတောင်းဆောင်းပါးတွေမပေးပါဘူး။ ကောင်းပြီ 4,000 ဇာတ်ကောင်ကျော်ရှိကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားဖို့, ကံမကောင်းပါကယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ခန့် 10 နာရီပါပဲ။ Google ကစျေးကွက်ကံမကောင်း, ပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်သင်၏စီမံကိန်းအပေါ်အလွန်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
Nr.9 ။ လူမှုမီဒီယာ Facebook နှင့် LinkedIn တို့
ဒါကြောင့်လူမှုမီဒီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, လူမှုရေးမီဒီယာသေးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထိခိုက်စေပါဘူး။ ဒါခေါ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအမှန်တကယ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရှိပြီးသောသာအကျိုးသက်ရောက်အခြားအသုံးပြုသူများမှဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏မြှင့်တင်ရေးပင်ဖြစ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သော Instagram ကိုအဖြစ်အများဆုံး social networking site များအင်ဂျင်ရှာဖွေအချက်အလက်များ၏ကူးစက်ခြင်းကိုပိတ်ထားကြပြီ။ ကဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုမသိရပါဘူး။ နေဆဲသင့်ရဲ့ website ၏ရှယ်ယာများ၏ဒါခေါ်ငွေပမာဏနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပို့ပေးကြောင်းတည်းသောကုမ္ပဏီ Facebook မှဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်အပြုသဘောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အဆင့်ထိခိုက်စေသောတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဤသည်သောပိုလန်ဆင်ခြင်ခြင်းများစွာသောလူဝင်များနှင့်တုံ့ပြန်သင့်ရဲ့ website မှာနောက်ထပ်သင့်ရဲ့ website မှာအကြံပြုမည်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်, သည်, ဒါခေါ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ကယ့်ကို Google တွင်သင်သည်စျေးကွက်အတွက်လူမှုမီဒီယာပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့သင်ပိုမိုအများအပြား client နှင့်အများကြီးပိုပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များဆောင်ခဲ့ရမည်။ ၏သင်တန်း, ဒီ paid ကြော်ငြာဘို့, ဥပမာအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ပါဝင်သည်။ လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစနစ်တကျထိုသို့ပြုမှမည်သို့စိတ်ကူးတစ်ခုရှိပြီးသူတစ်ဦးနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်လျှင်, သင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာ Instagram ကိုသူ့ဟာသူမှာသူတို့နောက်လိုက်သန်းပေါင်းများစွာဆည်းပူးသင်ယူခဲ့ကြကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ နှင့် Facebook ပေါ်တွင်သူတစ်လအတွင်းသန်းပေါင်းများစွာဒေါ်လာဝင်ငွေနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသော်လည်းအတော်လေးမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ သငျသညျအကောင်းတစ်က်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်နှင့်သင်ကြော်ငြာတွေလုပ်ပုံကိုသိလျှင်, သင်တစ်ကယ့်ကိုအကောင်းငွေသားမှတ်ပုံတင်စေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူကဒူဘိုင်းမြှင့်တင်မှကြွလာသောအခါလက်တွေ့ကျကျ Facebook ပေါ်တွင်နှင့် linkedin အပေါ်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအောက်ကပုံကိုကလစ်လိုက်ပြီးဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ရော်ဘာ။10 Google နှင့် Youtube ကိုအပေါ်စျေးကွက်?
သငျသညျအကြီးဆုံး search engine ကိုသိသလား? ၏သင်တန်းကဒီ Google ကဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်က YouTube ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ချက်ချင်းအပြီး။ ဒါကြောင့်လက်ရှိ 1000 လူတွေကိုဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူကုမ္ပဏီပေါင်းထည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်လူတွေက 10,000 ဇာတ်ကောင်ပြောပါရှိကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထိုင်ပြီးဖတ်ရှုဖို့အချိန်မရှိဘူး။ အကြောင်းမူကား, သူတို့ကအမှု၏အဓိကရာစေ့ရောက်ရှိခင်နဲ့, သူတို့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှု 20 မိနစ်ကျော်သုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့တော့ဘူးများသောအားဖြင့်ပျင်းရိနေကြသည်။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ပထမဦးဆုံး Google ကစာမကျြနှာမရနိုင်ပါ။ တစ်လထဲမှာရုပ်ရှင်ရာပေါင်းများစွာကိုအသံဖမ်း။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေါ်မှာရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်လည်းကောင်းတစ်ဦးနောက်ခံစေရန်နှင့်အတော်လေးခက်ခဲပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်သင်အမှန်တကယ် PLN 200 အကြောင်းကိုကုန်ကျသော Allegro အပေါ်အထူးပြုနောက်ခံကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ တကယ်အရည်အသွေးခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိနီးပါးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေဒီယိုအပေါ်တစ်ဦးအသံဖမ်းစတူဒီယိုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်း YouTube ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအောင်မြင်စွာဒူဘိုင်းကနေကုမ္ပဏီများမှရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တထောင်ရာပေါင်းများစွာသောလူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကြည့်ပါကလိုအပ်နှင့်ထပ်မံpolajowałတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ အသီးအပေါင်တက်သည်သင်၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်သူတစ်ဦးအလားအလာဖောက်သည်ဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ။
အပြည့်အဝကို Google စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသုံးစွဲဖို့, သင်အွန်လိုင်းမဟာဗျူဟာဗီဒီယိုများသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုသူများထဲတွင်တစ်ဦးကယ့်ကိုကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်ဖူးနှင့်သင်တန်း၏သင့်တိုင်းပြည်အတွက်သင့်လျော်စွာသူတို့ကိုဖော်ပြရန်ဗွီဒီယိုကြော်ငြာများဖန်တီးပါ။ သငျသညျရောင်းသောအရာကိုဝန်ဆောင်မှုအပေါ် မူတည်. လည်းပိုလန်တစ်ဒေသဖြစ်နိုင်သည်။ ၏သင်တန်းမဟုတ်ဘဲလူတိုင်း YouTube ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကိုတကယ်သင်ဥပမာ Fiverr.com အပေါ်လုပ်နိုင် PLN 50 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုန်ကျသည်။
Nr.11။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ optimization
အိုကေ, သင်က Google Analytics မှချိတ်ဆက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြုသောအမှုဖွင့်, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းရှိသည်။ ကြော်ငြာနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့်သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ အခုတော့ html ကုဒ်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုကောင်းအောင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်တစ်ဦးပရိုဂရမ်မာလိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင် programming language ကိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သောက်ဘ်ဆိုက်ကုဒ်အတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှါသင်တို့ကိုအကြံပေးကြပါဘူး။ သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သင်ဒီမှာ, မြေတပြင်လုံးစာမျက်နှာဖျက်ပစ်နိုင်နှငျ့သငျ wordpress ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်အခြား platform ပေါ်တွင်ယခုအချိန်အထိပွုပါပွီအရာအားလုံးကိုလက်တွေ့ကျကျဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်လျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တောင်မှအသေးဆုံးအပြောင်းအလဲများကယ့်ကိုသင်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏။ သင်လုပ်နေတာအတိအကျအဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးရှိပါကသင်စာမျက်နှာကုန်ကျမည်သည့်အံ့သြဖွယ်အမှားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, အလွန်အစအဦးမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပေါ်တယ်နေရာချပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမသိသောကြောင့်, ကျနော်တို့မိုက်အမှားတွေလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. အရာရာကိုဖန်တီးရန်နှင့်တကယ့်ကိုအငွေနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါအလားအလာဖောက်သည်များအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ။ အဆိုပါ website တွင်အမှားတွေလိုပဲ။ သူတို့မဆိုအမှားများကိုတွေ့မြင်လျှင်သူတို့မလုံခြုံဟုခံစားရနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်းတကယ်ပဲယုံကြည်တယ်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖောက်သည်နီးပါး 95% ဝက်ဘ်ဆိုက်ထားခဲ့ပါ။ Google မှာစျေးကွက်လည်းတကယ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်အပေါ်အခြေခံကြောင်းသတိရပါ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီဆောင်းပါးထဲမှာသင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ positioning ကိုသည်အဘယ်အရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီအနည်းငယ်အခြေခံမှုအရာတို့ကိုသင်ယူခဲ့ကြသည်။ သင်အမှန်တကယ်လုံးဝသင့်ရဲ့အသိပညာတက် Sum နှင့်အင်တာနက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ရန်လိုလျှင်။ သငျသညျအောကျဖျောပွ Google ကအွန်လိုင်းတော်လှန်ရေးကိုသွားသင့်ပါတယ်။ ကျိန်းသေသင့်ရဲ့အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့သောစာမေးပွဲများစစ်ဆေးပြီးဖြည့်စွက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထံမှဤဆောင်းပါးကိုဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုခုပေါင်းထည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ ဒါဟာတကယ်ကိုတစ်စျေးကွက်နှင့် positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏လုပျငနျးတခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်သင်၏အစွမ်းသတ္တိအထက်တကယ်လာပါတယ်။ သငျသညျအလွန်မကြာခဏသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့လိုအင်တာနက်ပေါ်တယ်သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်၏ positioning ကိုတကယ်ကျေးဇူးကန်းဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲတိုက်ခိုက်နေအရှုံးမပေးဘယ်တော့မှဒါပေမယ့်သင်အောင်မြင်နိုင်ဘူးလမ်းမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲကြောင့်ကျနော်တို့က Google ကနေကျွန်တော်တို့အမြတ်အစွန်းကိုဆောင်ခဲ့သောအချို့သောထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆင့်ရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲသာတတိယနှစ်တွင်အပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးအကြောင်းကိုနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ရည်ရွယ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်5နှစ်7မှမိမိတို့နေရာချကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ခြင်းနှင့်ဤသူသည်သင်တို့အာရုံစိုက်သင့်သောကျော်ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ကံမကောင်း, positioning ကိုအချိန်အများကြီးယူမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ပို. ပင်ပိုက်ဆံစုပ်ယူ။
PS ဤဆောင်းပါးကို 5,000 ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်။ သငျသညျပြီးသားသံသယအဖြစ်ဒီတော့သင်ကအင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏တစ်ခုလုံးကိုဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးကျနော်တို့ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ရှိပါသလား? ကျနော်တို့ရုံဆောင်းပါး၏အရှည်နှင့်အရည်အသွေးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အရေးပါသည်သင်တို့ကိုထင်ရှားပြကြပြီ။ ကြာကြာနှင့်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ခေါင်းစဉ်, အပိုမြန်သင့်ရဲ့ content တွေကို Google မှာနေရာယူထားသည်။ မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏နှငျ့သငျမှသင်၏ထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ website မှာပိုလန်တွင်သို့မဟုတ်ပြည်ပမှာ၏စျေးကွက်နှင့် positioning ကို၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။
သင်သည်သင်၏ SEO ဆိုသည်မှာက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အများအပြားအကြောင်းရင်းများ
ယနေ့ကုမ္ပဏီများနီးပါး 95% ကသူတို့ရဲ့ website သို့ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့တကယ်ကို Google တွင်သာထိုအကောင်းစွာ-ရာထူးတိုးနှင့်နေရာဝက်ဘ်ဆိုက်များဖောက်သည်အနိုင်ရ။ တကယ်တော့, website တစ်ခုလုပ်သင်သည်မည်သည့်ဖောက်သည်များဆောင်ကြဉ်းမမျှော်မှန်းရလဒ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်ပင်ကောင်းစွာလုပ်က်ဘ်ဆိုဒ်မဆိုငွေရှာမထားဘူး။
ဒီတော့ website တစ်ခုတည်နေရာအားသင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။
သင်တစ်ဦးထိရောက်သောနှင့်အလွန်အမြတ်အစွန်းအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ချင်လျှင်, သင်သာအော်ဂဲနစ်သော့ချက်စာလုံးများကနေတကယ် client ကိုရရန်ရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါကဒါခေါ် Google က AdWords အပေါ်ကြော်ငြာ 85% ကျော်စူပါထိရောက်သောမဟုတ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏။ Google တွင်ပေးဆောင်ရမည့်ကြော်ငြာများတကယ်သာယခင်က search engine များပေါ်တွင်အတော်လေးကြီးကြီးမားမား positioned ပြီကြီးမားသောကုမ္ပဏီများနှင့်သေူအသုံးပြုကြသည်။
ပိုလန်အင်တာနက်အပေါ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အလွန်ကောင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြောင့် Google ထံမှအသစ်သောဖောက်သည်များ၏အရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်နီးပါး 55% တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, 2015 ကတည်းက, အင်တာနက်နှင့်အွန်လိုင်းစတိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရှိန်အဟုန်ကအရမ်းမြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ လက်ရှိတွင်အင်တာနက်အပေါ်ဖောက်သည်များသူတို့ကထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေနေပါသည်။ ထမ်းဘိုးတို့ကို ပို. ပို. ဥပမာ Allegro ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် OLX အပေါ်, အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဝယ်ယူနေကြသည်။
နယူးက Google ဘလော့ဂ်များ ပို. ပို. မကြာခဏပေါ်ထွက်လာနေကြသည်။ ပို. ပို. ဒါခေါ်ဘလော့ဂါများခရီးသွားမှတ်တမ်းသို့မဟုတ်အဝတ်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖော်ပြချက်ထည့်ပါ။ စျေးကွက်အင်တာနက်အပေါ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဝါဆောသို့မဟုတ် Krakow နှင့်ပင် Legionowo အဖြစ်မြို့ကြီးများတွင်နှစ်တိုင်းတိုးဒါ့အပြင်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် positioning ကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပေါ်တွင်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်၏မြင်ကွင်းတိုးပွားလာနေသည်။ အင်္ဂလိပ်ကနေ Search Engine Optimization သို့မဟုတ် SEO ဆိုသည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်သည်ကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် SEO ဆိုသည်မှာနှင့်စျေးကွက်ဌာနရှိပါတယ်။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏က်ဘ်ဆိုက်၏မြင်ကွင်းတိုးပွါး, သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်, ဒိုမိန်းများ၏အခွင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်, သင်တန်း, တတ်နိုင်သမျှ Warsaw ကိုဒေသခံ positioning ကိုအဖြစ်ထိရောက်သောလုပ်ရန်ကြိုးစားအင်တာနက်ပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်စေ။
သင်သည်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်တည်နေရာအားစတင်သင့်ကုမ္ပဏီ၏မြင်ကွင်းတိုးမြှင့်နှင့်သင့်အွန်လိုင်းစတိုး၌သင်တို့၏န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သို့မဟုတ်သင့်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်သူကိုပိုပြီးဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ပြီးတာနဲ့။ သငျသညျ ပို. ပို. ဖောက်သည်အွန်လိုင်းဝယ်ယူနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ဖို့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနှင့် သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးနေ ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို။
တကယ်တော့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူအများစုကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှသူတို့တစ်တွေအလွန်ဆင်တူထုတ်ကုန်ပူဇော်ရှိရာအပေါငျးတို့သကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့စတိုးဆိုင်များ browse နိုင်ကြသည်မဟုတ်။
လူမျိုး၏ 85 ကျော်% Google တွင်ထိပ်5ရာထူးရိုက်ထည့်ပါ။ စျေးကွက်၏ပင်ထိုကဲ့သို့သောဟာသကမ္ဘာကသင်သေအလောင်းဖျောက်ရန်လိုလျှင်ထို့နောက် Google ၏တစ်ဖက်ကမ်းပေါ်မှာပြုရှိပါသည်။
သငျသညျနေရာချသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အနည်းငယ်အကြောင်းရင်းများ Google ကမြင့်မား သင့်ရဲ့ website မှာ?
ဒီထက်ပဋိပက္ခ clients များ
ကုမ္ပဏီအတွက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် outlays လျှော့ချ
ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်စတိုးဆိုင်များတွင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဝယ်ယူများ၏လမ်းကြောင်းသစ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်တောင်မှငါ့အညီမကြာသေးမီကအိမ်သူအိမ်သားကရိယာအမျိုးအစား RTV စတိုးဆိုင်သွား၏။ သူကအင်တာနက်ပေါ်ရှိ ratings check လုပ်ထားရုံအိမ်မှာအင်တာနက်ပေါ်မှာဤထုတ်ကုန်ဝယ်ပြန်လာသောထုတ်ကုန်မှာကြည့်ရှုကြ၏။ တစ်ဦးကမတ်ချဉ်းကပ်သူတို့ရဲ့ margin လျှောက်ထားရန်ရှိသည်ကြောင့်အများဆုံးကုမ္ပဏီများသည်စျေးကြီးအနည်းငယ်ပို store မှာထုတ်ကုန်ကိုဖော်ပြရန်။ အကြောင်းမူကား, သင်တန်း၏အင်တာနက်တွင်, သူတို့အချို့ရှိသေးငယ်လျှော့စျေးလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်။
ကောင်းစွာ website တစ်ခုတည်နေရာအားစတင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါကြောင့်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ website မှာတည်နေရာအားစတင်ရန်, သင်ခြစ်ရာကနေစတင်ပါရန်ရှိသည်။ ဆိုက်တူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မြန်နှုန်းဒီစာမျက်နှာပေါ်နှင့်အဘယ်သူမျှမ positioning ကိုကျိုးလို့ခေါ် spam များကိုလင့်များပြုတော်မူပြီရှိမရှိဘယ်လိုကြည့်ရှုပါ။
သင်တို့သည်လည်းလိပ်စာမှန်ကန်သောနှင့်သင်လိုချင်သောကုမ္ပဏီမှနေရာချပေးဖို့ရှိမရှိဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိပါတယ်ရှိမရှိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်စစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ site ကိုရလဒ်အတွက်မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်ရှိမရှိကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းတကယ်ပဲအများအပြားအချက်များရှိပါသည်။
တကယ်တော့လက်ရှိကြိမ်အတော်လေး Non-စံဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည်။ လောလောဆယ်အပေါင်းတို့, SEO ဆိုသည်မှာအစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ Google က algorithms ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၏သင်တန်း, ဒီကော်ပိုရေးရှင်းအသုံးပြုမှု 100% လျှို့ဝှက်သောစနစ်များကို။ ဒီတော့ positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်သုံးအထူးကုသူတို့တကယ်လုပ်နေတာအလုပ်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။
မပေးလုံးဝ clients များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူအထူးကုဥပမာ Google ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များသို့မဟုတ် Google မြေပုံအဘို့, google ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ဒေသခံ positioning ကိုရှိသည်။
တစ်ခုချင်းစီအထူးကုဒါခေါ်နှစ်ခုအဓိကအကြောင်းရင်းများသို့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ positioning ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်း။
ဝက်ဘ်ဆိုက် positioning ကိုဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဆိုက်တိုးတက်အောင်။ စာမျက်နှာကုဒ်တိုးတက်စေူခင်းနှင့်စာမျက်နှာမြန်နှုန်းစစ်ဆေးနေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းနှင့်လန်ဒန်ကနေလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာကြိုးစားခဲ့နှင့်ပြည်ပမှာဝက်ဘ်ဆိုက်များ positioned ပါပြီ။ လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ Warsaw ကို, Krakow နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Radzimin အဖြစ်သေးငယ်မြို့ရွာတို့၌ဥပမာဒေသဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များကိုနေရာချခြင်းမှပိုလန်ကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကူညီပေးသည်။
SEO ဆိုသည်မှာ - ခေါ်ရန် ME အခမဲ့ယနေ့နှင့်စီစဉ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကိုးကား!
ဝက်ဘ်ဆိုက် positioning ကို နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
သင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုပေါ် -Reliable သတင်းအချက်အလက်!
သင်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနေရာချခြင်းမှကူညီပေးပါမည်တဲ့ကုမ္ပဏီရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျနော်တို့အားရင်းနှီးခင်မင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ Google တွင် positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိသည်။
ဤအကြိမ်မှာတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ positioning ကိုကံမကောင်းတာ, အစားအတော်လေးခက်ခဲတဲ့တာဝန်နှင့်တကယ်ဆိုက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အဆင့်မြင့်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်ပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်အဘယ်အရာကိုရာခိုင်နှုန်းတရာကိုသိသောလူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်သည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကြွလာသောအခါအဘူဒါဘီအတော်လေးတိကျတဲ့မြို့ဖြစ်၏။ အဘူ ဒါဘီယေဘုယျအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းယူအေအီးအတွက်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သည်ဒူဘိုင်း Voivodeship ၏မြို့တော်အနီး ပင်လယ်ကွေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဗဟိုရေးစင်တာ စော်ဘွားအတွက် agglomeration ။
109 အတွက် 340,000 သူမြို့သားကျော်ယူအေအီးနှင့်ယူအေအီးအတွက်ဒုတိယမြို့တော်ရဲ့လူဦးရေအများဆုံးကြိမ်မြောက် 2018, ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းဇယားသူ့ဟာသူကြည့်ပါကအဘူဒါဘီအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်သည်။
ထိုအခတျေတှငျလူတွေအများအပြားအင်တာနက်ပေါ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ထုတ်ကုန်တွေအများကြီးရှာကြ၏။ သင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပထမအဆင့်ပေါ် positioned ခံရဖို့သင့်ရဲ့ site ကိုရှာနေလျှင်ဒါ့အပြင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ site ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သင့်ပါတယ်။
အဘူဒါဘီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမြို့တသည်နှင့်ထိုအရပ်မှကျနော်တို့ကယူအေအီးအတွက်သူကိုအနေအထားဝက်ဘ်ဆိုက်များအတော်လေးအနည်းငယ် clients များရှိသည်။
အဘူဒါဘီကျောင်းသားတစ်ဦးမြို့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြားသောဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အဘူဒါဘီအတွက် SEO ဆိုသည်မှာက်ဘ်ဆိုက်များကိုအောက်မေ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာစတင်သည်နှင့်ကဒီမှာလက်တွေ့ကျကျမြို့တော်ကိုစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာကျောင်းသားများနှင့်ဘဝနှင့်ပြည့်စုံသည်အဘယ်မှာရှိအပူဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။
အဘူဒါဘီအလတ်စားနှင့်အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အတော်လေးမြို့တမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကြွလာသောအခါ၌ပင်နှင့်မဟုတ်ဘဲ, ဒီမှာပိုကြီးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကစားသို့မလာကြဘူး။ ဒါ့အပြင် Google မှာ positioning ကိုနှင့်စျေးကွက်အမြဲဒီနေရာမှာလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာကြောင့်ဒေသခံစျေးကွက်များတွင်က်ဘ်ဆိုက် positioning ကိုထံသို့မရောက်ရ။ ကံမကောင်းစွာပဲဖောက်သည် preference ကိုစနစ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်ကဒီမှာနိုင်။ အောက်တွင်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့စော်ဘွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များနေရာချတော်မူသောအတူအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများမှရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ပြီးသားဒေသခံစျေးကွက်အပေါ် operating ဖြစ်ကြောင်းသင်ပြမှအဘူဒါဘီအတွက်ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ကျနော်တို့ kebab ဘီယာအသားညှပ်ပေါင်နှင့်ကျောင်းသားများအတွက်ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူအရက်ဆိုင်ယူပါလိမ့်မယ်။
ယခုကြှနျုပျတို့နှစ်ပေါင်းများစွာ SEO ဆိုသည်မှာနှင့်စျေးကွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များလုပ်နေခဲ့ကြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများဆုံးကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။
အဘူဒါဘီအတွက် SEO ဆိုသည်မှာ - ယနေ့ Call နှင့်အခမဲ့ကိုးကားစီစဉ်!
website က positioning ကိုအခမဲ့အစီအစဉ်များ
ယူအေအီးနှင့်ဒေသခံစာမျက်နှာများအတွက်သေးငယ်မြို့ကြီးများ၏ SEO ဆိုသည်မှာ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသေးငယ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေကျနော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကြိုဆိုခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစော်ဘွားအတွက်စာမကျြနှာအနေအထား။ ကျနော်တို့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးအတွင်းလည်ပတ်ကြောင်းသေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများရာပေါင်းများစွာကူညီပေးသည်ရှိသည်။
အဆိုပါသေးငယ် စော်ဘွားမြို့ကြီးများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် သင်အမှန်တကယ်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးသိအတော်လေးလူကြိုက်များမြို့တော်စည်ပင်ကများမှာ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသစော်ဘွားအတွက်ကောင်းစွာတည်ရှိသောမြို့။
သငျသညျပူးပေါင်းစတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအများအပြားအေးမြသည့်ကုမ္ပဏီများရှိပါတယ်ရှိရာဒူဘိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိ Voivodship ။ နှင့်ဖောက်သည်ဘယ်မှာသင်သည်သင်၏န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမြို့အနီးမြို့ငယ်လေးတွေမှာသာ 25 ကီလိုမီတာကွာဒူဘိုင်း၏ဗဟိုကနေအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချနိုင်သည့်အတွက်ကိုလည်းဆက်ဆက်ကြွယ်ဝဖောက်သည်။
သူတို့အားကြိမ်မှာတော့လူတိုင်းဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာနက်ရှိပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာသိချင်ကြပါပြီ တနေ့နီးပါးတစ်ခုလုံးကိုမြို့ရောက်ရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို။ ကောင်းပြီ, အဖြေရိုးရှင်းသောအင်တာနက်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်အနေအထားကကူညီခြင်းနှင့်စော်ဘွားများအတွက်သေးငယ်မြို့များ၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လန်ဒန်, လန်ဒန်, ဘရပ်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီများရာပေါင်းများစွာရာထူးတိုးနှင့်နေရာပါပြီ။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှာတော့ 15,000 သူမြို့သားကျော်ရှိပါတယ်, မြို့ 24,000 ကျော်စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအွန်လိုင်းနေရာချဖို့အလားအလာအလွန်ကောင်းလှ၏။
ဒါကြောင့်သင်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဤအရပ်ဌာန၌ပျမ်းမျှအသက် 20 နှင့် 65 နှစ်အကြားအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့လက်တွေ့ကျကျလူအများစုနေဆဲအလုပ်လုပ်နေကြသို့မဟုတ်ဝင်ငွေ fixed ပြီ, စကားပြော။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုပေါ်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်များမြှင့်တင်ရေးမှကြွလာသောအခါဤသည်အတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ့်ပိုက်ဆံရှိသည်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ကိုဖြုန်းနိုင်ကြသည်သူတွေကိုမှအင်တာနက်ပေါ်ရှိထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။
စော်ဘွား၌ဤအသက်အရွယ်ရှိလူများဆက်ဆက်လည်း Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုတနေ့ 10,000 ဖောက်သည်ထက်ပိုမိုရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ကြသည်။
ဒါကြောင့်သင်၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ချင်ပါတယ်လျှင် ယူအေအီးသို့မဟုတ်ပင်ပင်လယ်ကွေ့တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ပတျဝနျးကငျြဒေသများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် positioning ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း၏ positioning နှင့်အဘူဒါဘီစာမျက်နှာများကို Google အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်နိုင်သမျှပါ! ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအောင်မြင်စွာပူးပေါင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးကွက်အတွင်းကော်ပိုရေးရှင်းအထူးကုနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆက်လက်သိရသည်။ နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလည်ပတ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများသည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုတွေထဲမှာကျနော်တို့အွန်လိုင်းစတိုးများနှင့်လျင်မြန်စွာဖောက်သည်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်သောကုမ္ပဏီကူညီပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ positioning ကိုအမြဲအကြောင်းကိုတစ်နှစ်မှ6လအတွင်းထက်အနည်းငယ်ပိုလိုအပ်သည်။
ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တကွတဲ, အလုပ်ပြီးနောက်အင်တာနက်အပေါ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကိုကြည့်တော်မူသောသင်တို့ clients များ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်သင်တို့အဘို့ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်တစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်အရာအားလုံးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်သင်အွန်လိုင်းမြှင့်တင်မစတင်လတံ့သောအရာကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်သင့်ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အိမ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကယ့်ကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကူညီပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကကူညီချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အဖွဲ့ကသူတို့ကိုလိမ်ဖို့လူရှာနေကြသည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကူညီချင်တယ် စော်ဘွားအတွက်
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီဒေသခံစျေးကွက်ပေါ်တွင်သင်၏ရှေ့တော်မှောက်အောင်သင်ကူညီလိုသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကလုပ်ဖို့ tools များရှိသည်, ငါတို့သည်သင်တို့အပိုငွေရှာနှင့်ဒူဘိုင်းမြို့အနီးဒေသခံစျေးကွက်အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်, ကျနော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်နှင့်ယူအေအီးစျေးကွက်အပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ positioning ကိုရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းကနေ, ကစီးတီး၏ဗဟိုမှသာ 25 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုရှိပါကဒါကြောင့်မြို့လယ်ရရန်သင့်အား 20 မိနစ်ကြာလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ဒေသအလိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးနိုင်ဖြစ်ကြပြီး ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ၏မြေတပြင်လုံးကိုပြောင်းရွှေ့ သင့်ရဲ့အံ့သြစရာကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်။
အကြှနျုပျတို့သညျကိုအခွင့်အလမ်းပေးငါတို့ကိုယူအေအီး၌သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနေရာချပါစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သငျသညျလိုပါလျှင်သင်တို့သည်လည်း Instagram ကိုအပေါ်ဥပမာအားဖြင့်, geolocation နှင့်အင်တာနက်စျေးကွက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကဖတ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးများကိုအနည်းငယ်ဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တိုးတိုးလေးစျေးကွက်နှင့်အီးမေးလ်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအကြောင်းကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသိမ်းပိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒေသခံဖောက်သည်သင့်ကုမ္ပဏီရှာဖွေနိုင်အောင် Google ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ပေါ်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီအမှတ်အသားလုပ်နှင့်သင့် website ကိုပိုကောင်းအောင်အတတျနိုငျဆုံးနှင့်ပထမဦးဆုံးအသငျသညျတှေ့လိမျ့မညျ။
ဒူဘိုင်းအတွက် SEO ဆိုသည်မှာအဘို့အ Sumarizing
ဒါကြောင့်, ယူအေအီးအတွက်နေရာချထားခြင်း - ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါသည်နှင့်သင်ငါတို့အားအခွင့်အလမ်းဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းပေးလျှင်သင်ထိပ်တန်း 10 က Google အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအားလုံးအချိန်ကိုကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အင်တာနက်စျေးကွက်ယခုနှစ်အတွင်းတစ်စုံတစ်ဦးကပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း3ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အနေအထားနှင့်ဖောက်သည်ခုန်လျှင်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကိုထည့်သွင်းဖို့စတင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ Radzymin ၏အံ့ဖှယျမွို့၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်, ငါသည်သင်တို့ကိုကံနှင့်ဒူဘိုင်းမြို့အနီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။
Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? - ကဒီမှာရှိဖူးသို့မဟုတ်မမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များတွင်လူမှုကွန်ရက်လူငယ်များအကြားအဆက်အသွယ်၏လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြော်ငြာကိုညွှန်ကြားမှကြွလာသောအခါ Instagram ကိုပလက်ဖောင်း၏အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တည်နေရာတွင်သို့မဟုတ် SEO ဆိုသည်မှာ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုပုံမှန်ပလက်ဖောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ဆက်ဆက်ပိုပြီးနောက်လိုက်အနိုင်ရသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဒါခေါ်အင်တာနက်ကိုအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီထံမှစျေးကွက် Automation - instagram အပေါ်နောက်လိုက်ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
Instagram ကိုပုမျိုးဆက် Y ကိုမှ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဆယ်ရာစု၏ 80s တှငျမှေးဖှားကလူကပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ယခုဒါခေါ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျိုးဆက်ထောင်စုနှစ်တစ်ခုမျိုးဆက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကိုဤအမျိုးအစားမှရတဲ့ကယ့်ကိုအလွန်ခေတ်မီစျေးကွက်လမ်းကြောင်းများလိုအပ်သည်။
အဆိုပါ Instagrama ရုပ်သံလိုင်းပေါ်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရေးကိုကျေးဇူးတင်ကျနော်တို့အများအပြားအလားအလာဖောက်သည်များနှင့်ကန်ထရိုက်တာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်စျေးကွက်ပလက်ဖောင်းပေါ်လာပေမယ့်ပဲသူတို့ရဲ့ Charm မြှင့်တင်ရန်အဘယ်သူသည်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များမဟုတ်ပါ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကဝင်ရောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့မြင်နေရကျိုးနပ်သည်။
လူကြီးလူကောင်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် Third-party န်ဆောင်မှုများ,
ဒီတော့ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ Instagram ကိုသစ်ကိုဖောက်သည်ရရှိမှုအရကိုစတင်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကဒီလူမှုရေး platform ပေါ်တွင် account တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့ - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ - Instagram ကိုမှာ Start
ကျနော်တို့ Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမစတင်မီထိုသို့သောသိချင်စိတ်။ ဒီပလက်ဖောင်းပြီးသားနှစ်ပေါင်းများစွာက Facebook ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစက်ထဲကနေ Facebook ပေါ်မှာကြော်ငြာပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့မှာလည်း Instagram ကိုပေါ်ပေါ်လာကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့တကယ့်သဘောမျိုးနဲ့လူအများကြီးကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနေစဉ်အတွင်း Instagrama ကနေရိုက်ထည့်ပါကအတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏။ ဒါဟာ Facebook ပေါ်မှာကြော်ငြာအတော်လေးကောင်းတဲ့ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းကျနော်တို့အများကြီးပိုဖောက်သည်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အမေရိကနဲ့အာရှကနေအသုံးပြုသူသည်လက်ရှိတွင်သန်းပေါင်းများစွာကယ့်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများထုတ်ဝေရန်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များ social network ဖြစ်သည်။
Instagram ကို 2010 ဖန်တီးကာပန်းသီး app ကိုကဲ့သို့မိမိကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ Instagram ကိုလျင်မြန်စွာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကြီးပွားသတည်း။2နှစ်များတွင်လက်တွေ့သေးငယ်တဲ့ application ကိုမှဒစ်ဂျစ်တယ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးလူမှုကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထက်နည်း3နှစ်ပေါင်းအဘို့, ဤလျှောက်လွှာကိုအလွန်အစအဦးမှာအထူးသဖြင့် Central America မှာနိုင်ငံအများအပြားအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Instagram ကိုအကြောင်းဒေါ်လာဘီလျံတစ်အလွန်ကြီးမားသောငွေဥပဒေကြမ်းများအတွက် Facebook ကလွှဲပြောင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီပလက်ဖောင်းဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်ဘယ်ကြောင့်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကယ့်ကိုကြီးမြတ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၏သင်တန်း, ဒီကုမ္ပဏီပြီးသားအဲဒီအခြိနျမှာအလွန်ဆင်တူဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းပိုကုမ္ပဏီအများအပြားရှိခဲ့သည်ကိုပထမဦးဆုံးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သျောလညျးကို Instagram က၎င်း၏ဓာတ်ပုံများကိုများ၏ထို့အပြင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်အများကြီးပိုမြန်အရှိန်အဟုန်မှာ screen ကိုနှိမ့်ချရွှေ့ဖို့နိုင်စွမ်းအရှိန်သိရသည်။ ဒီပလက်ဖောင်းအကြီးဆုံး Facebook ကကြော်ငြာ applications များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့တကယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Instagram ကိုလည်းအလွန်လွယ်ကူစွာလျှောက်လွှာမှဖြောင့်ဖုန်းမှဓါတ်ပုံထည့်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါင်းစပ်။ လျှောက်လွှာများစတင်ထံမှအကြောင်းကိုနောက်ခြောက်လအကြာမှာတော့ကုမ္ပဏီပြီးသားသန်းထက်ပိုမိုအနည်းငယ်မှတ်ပုံတင်သုံးစွဲသူများကရှိခဲ့ပါတယ်။ Instagram ကိုအလွန်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နှင့်၎င်း၏ application ကိုမှဆက်ပြောသည်။ လျင်မြန်စွာဓါတ်ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စွမ်းရည်။
Instagram ကိုထံမှစျေးကွက်စတင်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထိုက်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်?
Instagram ကိုအတော်လေးတိကျတဲ့စျေးကွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ဖက်ရှင်, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်မိန်းမတို့အဘို့အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဆကျဆံတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ်အာရုံစိုက်။ အဖြစ်ဝေးယောက်ျားသက်ဆိုင်ရာကြသည်အတိုင်း, အထီးအုပ်စုတွင်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ကြောင်းကုမ္ပဏီ, သင်တန်း, ကြိုကြားကြိုကြားအမှုပေါင်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤမဟုတ်ဘဲအလွန်ရှားပါးတချွတ်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်ကြသည်။
Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့ - 100% စျေးကွက် Automation! - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
Instagram ကိုအလွန်ရှင်းလင်းစွာဤပလက်ဖောင်းတွင်အသုံးပြုသူများသည် '' ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏ရာခိုင်နှုန်းဥပမာ twitter ဘို့, အခြားလူမှုရေးကွန်ရက်များ၏အမှု၌ထက်အများကြီးပိုကြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ အဓိကအားဖြင့်သူတို့တစ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ချမတိုင်မီ Instagram ကိုပေါ်မှာထိုင်သောမိန်းမရိုးရှင်းစွာအဝတျအစားတွေအများကြီး browse လို့ပဲ။
အဘယ်ကြောင့် Instagram ကိုပလက်ဖောင်းကနေစတင်ရကျိုးနပ်ပါသနည်း Instagrama အသုံးပြုသူများအများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု Facebook သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ထိုအခါတကယ်တော့ Instagram ကို 2018 အတွက်ကျော်3ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ကြောင်းတက်ကြွအသုံးပြုသူများကိုလက်တွေ့ကျကျမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောတတိယလူတစ်ဦးကိုမှန်မှန်ဒီ site ကိုအသုံးပြုသည်ကိုပြောသည်။
1 ။ Instagram ကိုအပေါ်သင့်ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်
အလွန်တစ်ခုသင် Instagram ကိုအကောင့်ဖွင့်လှစ်များ၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်အစမှာ။ ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်ပုဂ္ဂလိကအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအကောင့်များအကြားရှေးခယျြနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီအကောင့်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကံမကောင်းသင်သည်သင်၏ Facebook အကောင့်မှသူတို့ကိုချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခြေခံပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာဖြည့်နဲ့သင်ကို advertise တံ့သောအတွင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤသည်ယင်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုစာရင်းဇယားမှနောက်ထပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးစွမ်းသည်နှင့်သင်ကမကထကြော်ငြာတွေကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အခြားအသုံးပြုသူများသင်၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အစမှာသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်းကိုလိုဂိုကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရုပ်ပုံသင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်ရပါမည်။
နောက်တစ်နေ့အရာသည်သင်၏ထူးခြားတဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပညာရှိတစ်ခုခုသို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖော်ပြချက်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အခြားသော website များသို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှစာသားကိုကူးယူဘယ်တော့မှကြိုးစားပါ။ လက်ရှိအချိန်တွင်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဒါခေါ် spam များကို filter များရှိသည်ကြောင့်။ အဲဒီ filters သည်အခြားဆိုက်များမှကူးယူစာသားကိုရှာသည်အလိုအလျောက် Instagram ကိုပေါ်ရှိသင့်စာမျက်နှာ၏အဆင့်လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ website မှာကြီးမားတဲ့အက္ခရာများ၌ရေးထားသမျှသောအတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်ကိုအတော်လေး Non-စံကြည့်ရှုကြ၏။ သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်လိုခငျြမဟုတ်လျှင်ကောင်းပြီ, ဒါဆိုသင်သည် Instagram ကိုအပေါ်သင်တို့အဘို့ကိုရှာဖွေသောလူသင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏နာမတော်ကိုဖော်ပြရန်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ကြောင့်ပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အရေးအပါဆုံးအရာမှတ်မိလွယ်တဲ့နဲ့အလွယ်တကူမှတ်မိစေခြင်းငှါသင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သင့်နာမတော်အဘို့ကြောင်းကိုသတိရပါ။
နောက်ထပ်အလွန်အရေးကြီးသောအရာ။ Instagram ကိုဒါခေါ် hashtags ကိုဖြည့်စွက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကဆက်ပြောသည်။ အကြောင်း, အလားအလာ Instagram ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့၏ profile များကိုဤခေါင်းစဉ်တွင်အချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရှာဖွေကြောင်းဒါခေါ် picket သော့ချက်စာလုံးများဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုသည်: #DubaiCityCompany
Marketing ကို Automation - instagram အပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့! - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
2 ။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင် Start
အစအဦးမှာ, ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသား Instagram ကိုမှပါပြီသူတွေကိုအဲဒီမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီကြောင့်ဟုချေါသညျအဘယျသို့လေ့လာသင်ယူကြောင်းသေချာအောင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်ယခင်ကရုံအသစ်ရဲ့ Instagram ကိုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြလူတိုင်းအတွက်အကြောင်းကြားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာရိုးရှင်းစွာ, linkedin, goldenLine Facebook, twitter ပေါ်မှာအတို post ကိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, စူပါအံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုလိုကျပါမညျသူကိုရုတ်တရက်နှစ်ထောင်လူတွေမျှော်လင့်ထားပါဘူး။
လောလောဆယ်ကိုသင် Facebook ပေါ်မှာရှိသည့် 40 ကျော်% ဖြစ်ကောင်းပြီးသားတစ်ခု Instagram အကောင့်ရှိသည်။ သငျသညျ Facebook ကို Instagram ကိုသိကြသည့်အတိုင်းအတူတကွချိတ်ဆက်ဒါကြောင့်သူတို့က data တွေကိုဖလှယ်ဖို့သေချာပါဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့် Facebook မှာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းသူကျိန်းသေသင်သည်လည်းတစ်ခု Instagram အကောင့်ရှိသည်သောစက်ကနေအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်အနည်းငယ်ပို့စ်များကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
3 ။ Instagram ကိုအပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများ Publish
ဒီတော့ဓါတ်ပုံများငါ Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်ရကြဘူးဘယ်လိုမေးခွန်းနှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးမလဲ
ကဓါတ်ပုံများနှင့်မီဒီယာ၏စာပမြေားမှကြွလာသည့်အခါတစ်ဦးကောင်းနည်းဗျူဟာနှင့်၎င်း၏တသမတ်တည်းအကောင်အထည်ဖော်မှုတသမတ်တည်း Instagram ကိုဆက်စပ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ နှင့်သင့်အချိန်အပြည့်အဝအပျနှံဧကန်အမှန်အသစ်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို၏အောင်မြင်မှုနှင့်နောက်လိုက်များ၏အသစ်တစ်ခုအရေအတွက်ဝယ်ယူနှင့်အတူချွတ်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဒီမှာအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်အရေးအပါဆုံးအရာကသင်၏ဓါတ်ပုံ၏အရည်အသွေးနှင့်သင်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်၏ရုပ်ရှင်၏အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, HD ကိုအရည်အသွေးကို၌နေသောဗီဒီယိုများ instagram နဲ့ Facebook ပေါ်မှာ% ပိုမိုမကြာခဏ 50 ထက်ပိုပါတယ်။ အခြားကုမ္ပဏီများသာ HD မှာလက်တွေ့ကျကျအရာအားလုံးကိုပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာဖြစ်ရပါမည်။
ကုမ္ပဏီများသည်မဟုတ်ဘဲဓါတ်ပုံအဓိကအားဖြင့်မျှဝေပါ။ Instagram ကိုအသုံးပြုသူများကပိုပြီးဓာတ်ပုံဖို့ထက်ရုပ်ရှင်တွေကိုတုံ့ပြန်ရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကပိုမကြာခဏရာထူးတိုးပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ယနေ့ခေတ်သည် Instagram ကိုနှင့် Facebook algorithms သူတို့ရဲ့စနစ်တွေကိုပြောင်းလဲပါပြီ။ ဤသည်စင်ကြယ်သော server ကိုစီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုတကယ် 200-300 MB အထိကြာနှင့်အခြားလိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်သူတွေကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ကလစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်တန်းအချို့အချိန်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်စာရင်းထဲကဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်သည်သူတို့ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ် Instagram ကိုအပေါ်အဖြစ်ရေပန်းစားမဟုတ်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုရန်ရှိသည်။
သာအရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ! သငျသညျ Instagram ကိုအပေါ်ထိပ် 10 ရုပ်ရှင်ကိုသွားပါ။ သင်တို့သည်ဤကုမ္ပဏီများသည်အများစုမှတ်သားထားတဲ့အရာကအလွန်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုဓာတ်ပုံများအတွက်, သင်တန်း, လုံလောက်စွာသူတို့ဖော်ပြရန်အရာကိုသာ post အလွန်မကြာမီမြင်လိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ်အရည်အသွေးနိမ့်သို့မဟုတ်အလတ်စားအရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ပုံများပို့စ်တင်မစတင်ပါ။ အကယ်စင်စစ်ကလူသင်၏ပရိုဖိုင်စွန့်ခွာရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
တည်းဖြတ်ခြင်းဓါတ်ပုံများနောက်တစ်နေ့လိမ္မာပါးနပ်ပွဲစဉ် filter များမှတဆင့်ဓါတ်ပုံများ၏တည်းဖြတ်ကြလိမ့်မည်။ သိ Instagram ကို filter များအများစုဟာအရောင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းနိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဖုန်းပေါ်တွင်အများစုအသုံးပြုသူများ Mayfair filter ကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်နှင့်အတူကောင်းသောနေလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကယ့်ကိုပူနွေးသိမ်မွေ့သက်ရောက်မှုပါပဲ။ ငါသည်သင်တို့ကိုပိုပြီးနောက်လိုက်ရကူညီပေးနိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုဓာတ်ပုံရိုက်များအတွက် hashtags ကိုသုံးပါ။ သငျသညျ add နိုင်ပါတယ်အများဆုံးပမာဏကို 30 hashtas ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အခြား Instagram ကိုအသုံးပြုသူများသည်သင်တို့အဘို့ရှာဖွေချင်ပါတယ်ကြောင်းအလုပ်မှာလက်ျာတစျခုရှာတွေ့မှကျနော်တို့ကိုသင် webstagram တွေ့မြင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာသင်လူကြိုက်အများဆုံး hashtags ကိုရှေးခယျြနိုငျရှိရာအလွန်ရိုးရှင်းသောဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ၏အခြေခံပေါ်မှာ, သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံး hashtags ကိုထည့်သွင်းဖို့ Instagram ကိုအပေါ်ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်ဟုလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်သင်တန်းတစ်ခုချင်းစီ post ကိုအဘို့ကိုရွေးပါ။
Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့ - Webstagram စျေးကွက် Hasztags Creating!
ဓာတ်ပုံများ 24 နာရီတစ်ရက် Publish ။ ဤအချက်မှာ, သင်က Instagram ကိုလက်တွေ့ကျကျ 24 နာရီနေ့၌ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ဝေရန်ဖြစ်နိုင်ပုံကိုအံ့သြနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဖြေကိုသင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကူညီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုစတင်သုံးစွဲဖို့ရှိသည်, အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
4 ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပါ
အများဆုံးပုံမှန် Tailwind အလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအောင်မြင်စွာ Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေဖို့ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၏သင်တန်း, အလွန်အစအဦးမှာပါကျွန်တော်တစ်ဦးစံတက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသုံးပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပို့စ်များကိုဖြည့်စွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နောက်လိုက်များ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်အားရှိသည်ဖို့လက်တွေ့ကျကျတိုင်းနှစ်နာရီဖြစ်ရမည်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။
Tailwind စျေးကွက် Automation - instagram အပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့!
ဒီပရိုဂရမ်သင်အမှန်တကယ်ပို့စ်များကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးမားအရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့အိပ်ပျော်နေစဉ်သင့်ရဲ့ရှယ်ယာမပါဘဲဘယ်ဥပမာ Instagrama ထံသို့စလှေတျပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီဤအစီအစဉ်နှင့်ကြားခံပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးခြစ်ရာကနေလက်တွေ့ကျကျစတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ 5,000 ကျော်မှ Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပါပြီ။ လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးဆုံး Instagram ကိုရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီစျေးကွက်ရုပ်သံလိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအပေါ်အလွန်အကျွံအလေးပေးထားကြပါဘူး။
Buffer စျေးကွက် Automation - instagram အပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့!
5 ။ မှတ်ချက်လေးနဲ့အကြောင်းကြား
အလွန်မကြာခဏပြီးသားအကောင့်ရှိသူတွေကိုအပြန်အလှန်လိုင်းများကြည့်ရှုပါ။ ဤအချက်မှာ, သင့်အလုပ်ကသူတို့ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနေလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းသည်သူ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်သို့မဟုတ်အကျဉ်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကမကြိုက်ဘူးအချက်အလက်တွေကိုဖြည့်စွက်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
လူအများစုဟာကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ် Instagram ကိုfollowersówရဖို့ဘယ်လိုတူညီတဲ့မေးခွန်းကိုမေးမြန်း? ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်အခြားသူများကိုကူညီပေးသည်။ သငျသညျလညျးအကကိုကြိုက်ကြောင်းအခြားအသုံးပြုသူများအသိပေးမှတ်ချက်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်လည်းသတင်းအချက်အလက်ကိုငါ့ပရိုဖိုင်းကိုလိုက်နာသို့မဟုတ်ဟေ့ငါ့ရုပ်ပုံလွှာကိုကြည့်ပါထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတက်ကြွစွာကသူတို့ရဲ့ website သို့နှင့်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်လိမ့်မယ်အဖြစ်အသုံးပြုသူ 80 ကျော်%, သင်တန်း, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုလိုကျနာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့သဘောသဘာဝဆောက်လုပ်ထားသောကြောင့်တကယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏။
ထိုအဖွင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကလူတို့အကြားအပြန်အလှန်ဖန်တီးဖို့ကြောင်းရိုးရိုးသားသားဖြစ်ကုန်အံ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီကအကြောင်း 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းယူဆခဲ့သည်အတိုင်းဤအကျိုးတူ၏ယူဆချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူသားတွေပိုမိုမြန်ဆန်လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပါ။
သူသညျလညျးမသာတိုက်ရိုက်အင်တာနက်ကိုပူးပေါင်း။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပြည်တွင်းဖြစ်ကလူကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျဝါဆော၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။
6 ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုနေရာချပေးဖို့ data ကိုစျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းအလွန်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ရှိဖူးသို့မဟုတ်မမေးခွန်းဖြစ်သနည်း ဒေတာကို download လုပ် data တွေကို Download သို့မဟုတ်မဟုတ်လော
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့် Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့။
ဒေတာစစ်ဆေးနှင့်ဤဒေတာကို retrieve ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း Tailwind အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဖို့နောက်တစ်နေ့အရာက Google Analytics မှစစ်ဆေးသည်။ ဒါဟာသင် Facebook ပေါ်မှာတစ်စျေးကွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ထူထောင်အထူးသဖြင့်အခါ, အခြိနျမှနျမှဝင်နှင့်လူ Instagrama ဝင်မည်မျှမြင်နေရကျိုးနပ်သည်။
7 ။ မာကုလူကြိုက်များအသုံးပြုသူများသည်
ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပင် hashtaging ဒေသခံအသုံးပြုသူများကိုရောက်ရှိဖို့နိုင်စွမ်းတိုးပွားစေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျဝါဆောမြို့အနီးနေထိုင်ပြီး Legionowo ၏မြို့ရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်လိုပါလျှင်။ ကျနော်တို့ Instagram ကိုအပေါ်ဒူဘိုင်းမြို့သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်း၏မြို့သမ္မတကိုရှာဖွေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလွန်အရေးကြီးသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစားအဆောက်အဦ။
Instagram ကိုပေါ်ဤအကြောင်းလူကြိုက်များအသုံးပြုသူများအတွက်သတ်မှတ်ရေး။ ဒါဟာဤလူသည်သင်၏ဓာတ်ပုံရုပ်ပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုမှုသို့မဟုတ်ပြီးသားပေးထားသောတည်နေရာမှာနေထိုင်သူတွေကိုရန်သင့်ဓါတ်ပုံကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျမသာ Instagram ကိုပေါ်တွင်သင်၏စာပမြေားကိုမြင်ရပေမယ့်လည်းသင်ရှာဖွေနေတဲ့ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကလူကိုကူညီရှာဖွေသူတွေကိုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးကူညီပေးပါမည်။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့သင့်ရဲ့ဝုဏ်အပေါ်လျော့နည်းအချိန်အတွက် instagram အပေါ်နောက်လိုက်ရပါသလဲ။ ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်ကြော်ငြာမှချိတ်ဆက်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ, လူတို့အဘို့, သင်တန်း, ကြည့်ပါ။ tag နဲ့သူတို့ထဲကတဦးတည်းအဖြေကိုပါလျှင်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုငါသင်၏ပရိုဖိုင်မှတရာအနည်းငယ်ကလူရလိမ့်မယ်, စက်ကနေသင့်ရဲ့ရုပ်ပုံလိုအပ်ပါတယ်။
Instagram ကိုအပေါ် 8 အသုံးပြုမှု geotargeting
geotargeting ကိုသုံးပါ - ဒီအတော်လေးကောင်းတစ်ဦးစနစ်ကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဒေသခံ positioning ကိုမှကြွလာသောအခါ။ သင်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖောက်သည်ရှာနေသည့်အတွက်ကုမ္ပဏီရှာဖွေနေလျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကြှနျုပျတို့သညျ, ဥပမာ, သင့်သည့် Instagram ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်တစ်ဦး၏တည်နေရာကိုထည့်သွင်းကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သငျသညျ Krakow အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို run ပါက Gdansk ဆိုမှ client များအတွက်ကိုကြည့်ဖို့မသဘာဝကျပါတယ်။ သငျသညျကိုသာပြည်တွင်းစျေးကွက်အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါကဒီတော့သတ်မှတ်ထားသောဧရိယာပြင်ပကနေလာသူမိတ်ဆွေတို့ကိုတကယ်ကိုသင်အရေးမပါဘူး။
သငျသညျယူအေအီး၏တပြင်လုံးကိုပြောင်းရွှေ့လိုပါကရိုးရိုးဥပမာ #Dubai နှင့် #Abu ဒါဘီသို့မဟုတ် #Sharja အဘို့မြို့တို့ကိုထည့်ပါ။ စက်သင့်ကုမ္ပဏီကဒီဒေသတစ်ခုထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ကြောင်းဒေသအတွင်းရရှိနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုပြသသောကွောငျ့ geolocation အလွန်ကောင်းသောစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တကယ်တန်ဖိုးရှိထွက်စစ်ဆေးနေနှငျ့သငျဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယို add, ကရှေးခယျြနိုငျတည်နေရာကိုဖြည့်စွက်။
9 ။ အခြားစျေးကွက် Follow နှင့်ကိုလိုကျနာ
နောက်လိုက်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောလမ်းပြီးသားအတိတ်တွင်တီထွင်ခြေရာတွေအတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူနှစ်ပေါင်းများစွာဒူဘိုင်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတည်နေရာအားထားပြီးသူကိုယောဟန်သည်အနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာ linkedin ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်မှာကသူ့ပရိုဖိုင်းကိုလိုက်နာမှပညာရှိတဲ့အပြောင်းအရွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဧည့်သည်ကထပ်ပြောသည်သောအရာကိုသူကထပ်ပြောသည်ဘယ်လိုရှုပါ။
နည်းပညာသင်တန်း, အဲဒါကို 100% ဥပဒေရေးရာနှင့်အသင်တို့ထံမှမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပြုမယ်လို့နောက်တစ်နေ့လူတစ်ဦးသင်တန်းဆရာယောဟနျအနောက်နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်း၏အမေရိကကနေဦးဆောင်တိုးတက်မှုနှုန်းဟက်ကာများသည်။ ဒါ့အပြင်အောင်မြင်စွာသင်တစ်ဦး bit နဲ့နားထောင်ရန်နှင့်စျေးကွက်အကြောင်းကိုဖတ်ပါနှင့်သင်တို့သည်လည်းအားလုံး data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဘယ်လိုသိကြနှင့်မည်သို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိအလွန်အားကြီးသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ လျှင်
web ပေါ်မှာကဤလူကြိုက်များပါသောလူများတို့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခြားသူများကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့် Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့သင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ profile များကိုနေ့ဟာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်နေ့ကစစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်ရိုးရိုး၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်နှင့်၎င်းတို့၏လူမှုရေး profile များကိုအပေါ်တူညီတဲ့စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သို့ရယူပါ။
10 ။ Instagram ကိုပေါ်ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်အောင်အတွက်စနစ်တကျ
အရေးအပါဆုံးအရာအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်သောစနစ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အသစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုင်းများ၏ထို့အပြင်ရိုးရှင်းစွာမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ linkedin အပေါ်ရေးသားချက်များထည့်သွင်း Facebook ပေါ်မှာမြှင့်တင်သငျသညျတပြင်လုံးကိုပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်အားလုံးပါပဲ။ ဒါဟာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင်သည်ထိုသူတို့ပြောလိုချင်တာတွေနားလည်ပါစေရန်နေ့သတင်းအချက်အလက်နေ့ကထည့်သွင်းဖို့အချိန်ပါပဲ။
ဒါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်အချိန်အများကြီးကြာပါသည်။ ထို့ကြောင့်, အခြိနျမှနျမှအလိုအလျောက်အပြင်ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေအကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဝင်ထိုက်သည်။ Marketing ကိုထိရောက်သော6months ago ကြီးနှင့်ပြီးသားလုံးဝထိရောက်မှုဖြစ်ရသောနေ့တစ်ရက်ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းအရေးအပါဆုံး instagram အပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့လျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်ကြိုးစားပါ။ ဘယ်လိုသင်ဤအတူငွေရှာသလဲ?
Instagram ပေါ်နောက်လိုက်ရရန်မည်သို့တက် Sum သလော
ကံမကောင်းစွာပဲသင်၏လူမှုပရိုဖိုင်းကိုလိုက်နာတဲ့သူတွေအရေအတွက်များတဲ့ရဖို့။ သငျသညျအေးဓါတ်ပုံရှိသည်နှင့်ပညာရှင်ပီသစွာ YouTube ကိုဗီဒီယိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပေမည်။ တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းသောလမ်းထိုကဲ့သို့သော Metacafe နှင့် pintere ကဲ့သို့သောအခြားဗီဒီယိုအားလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အတိမ်အနက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းစနစ်များနှင့်အကြံပေးခြင်းအားအသုံးပြုခြင်းကိုသင် Instagram ကိုအပေါ်ဒါပေမယ့်လည်း Facebook ပေါ်တွင်မသာနောက်လိုက်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကရဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီဟာအနိမ့်ပမာဏနှင့်အတူအောင်မြင်မရနိုင်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့စျေးကွက်နည်းဗျူဟာပြန်လည်စဉ်းစားရပေမည်။ နောက်လိုက်များနှင့် Instagram ကိုပေါ်စေ့စပ်အသုံးပြုသူတစ်ဦးကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုစုဆောင်းဖို့ကျိန်အချိန်ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအသက်အများကြီးတက်ယူပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ။
ဒါ့အပြင် Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအပြည့်အဝဆွဲဆောင်မှုအပြည့်အဝနှင့်ပြောင်းလဲနေသောစေခြင်းနှင့်ဥပမာ Facebook နှင့် Pinterest ဘို့, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အခြားလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများရန်သင့် Instagram ကိုထည့်သွင်းဖို့သတိရဖို့ကြိုးစားရဖို့ဘယ်လိုစုစည်းတင်ပြရန်။ အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများဓါတ်ပုံများအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ကြိုးစားပါ။
အခြားသူများကိုအောက်ပါနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် overdo ဖို့ဘယ်တော့မှကြိုးစားပါ။ Instagram ကို spammer တွေကပိတ်ဆို့ filter များရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ ဒါကြောင့်လည်းလူအတော်များများသင့်အကောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အောက်ပါနှင့်ပြန်ရဖို့ကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်။
သာဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီထံမှ Warsaw ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အံ့သြဖွယ် SEO ဆိုသည်မှာ!
အဆိုပါဝါဆောက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုဒီရှိပါသလဲ ဝါဆောစီးပွားရေးလုပ်နေတာလူများ 50% -Over ။ နှင့်စျေးကွက်နှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ဧရိယာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။
တကယ်တော့သူက Google ကိုပေါ်က်ဘ်ဆိုက်ကိုနေရာချခြင်းမှကုန်ကျဘယ်လောက်အံ့ဘွယ်သောအမှု။ လူတိုင်း Warsaw ကိုစင်ကြယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်းကိုသိတယ်။
တကယ်တော့စျေးနှုန်းများအများအပြားအချက်များပေါ်တွင်ကဒီမှာမှီခို, SEO ဆိုသည်မှာသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ positioning ကိုမတင်းကျပ်စျေးနှုန်းစာရင်းလည်းမရှိ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Warsaw ကိုပါတီများ၏ positioning
ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီနေရာချလိုသည့်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း။ Google မှာထိုအခါကဏ္ဍရဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို။
သင်တို့သည်လည်းသော့ချက်စကားလုံးများကိုစစ်အတွက်ရလဒ်တွေကိုစစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့သာကျွန်တော်ဆိုက်ယှဉ်ပြိုင်စေလိုသည့်အတွက်။
ထိုအခါက Google က search engine ကိုလမျးညှနျခ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ optimized နှင့်မည်မျှအကြောင်းအရာ posted ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာစစ်ဆေးမှု: ဆိုက်ကို Checker Pro ကို
Enter နှင့် SEO ဆိုသည်မှာထုတ်စစ်ဆေး: https://sitechecker.pro/en/
ထိုအခါ: Neil Patel က Uber အကြံပြုရန်
ဒါဟာက Neil Patel ကဝင်ရောက်ထွက်စစ်ဆေးနေရကျိုးနပ်သည် Ubersuggest:
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပိုလန်ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါကဝါဆောအတွက်ဥပမာကားများနေရာချခြင်းသို့မဟုတ်ဥပမာဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲတွေ့မြင်: positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ Legionowo
ဝါဆောအတွက် positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ?
ဒါဟာကြောင်းအသုံးအနှုန်းများ၏ဥပမာကိုအောက်ပါအမျိုးအစားများကိုသတိထားမိသွားရကျိုးနပ်မယ့်: ဝါဆောစာမျက်နှာများ၏နေရာချထား SEO ဆိုသည်မှာအထူးကုများကအများဆုံးလူစည်ကားဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကားများ, နိုက်ကလပ်, ဟိုတယ်များသို့မဟုတ် SEO ဆိုသည်မှာကဲ့သို့သောအလွန်ရေပန်းစားစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်လျှင်။ ထိုအခါ Google တွင် positioning ကို၏စျေးနှုန်းမသာပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်း positioning ကို၏အချိန်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။
website က positioning ကိုအပေါ်အကောင်းတစ်ဦးအထူးကု၏စျေးနှုန်းဆက်ဆက်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Bing မှသို့မဟုတ် Google အတွက်သင့်ရဲ့ site ၏အနေအထားကိုမြှင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုအချိန်ပိုမိုယူပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကို positioning ကိုစဉ်အတွင်းကိုသတိရပါသလော
သို့ရာတွင်ထိုသို့ website တစ်ခု၏ positioning ကိုရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အမြှုတ်အလုပ်ဖြစ်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်ဆက်အမှတ်တံဆိပ်ပင်လှုပ်ရှားမှုများ၏ချုပ်ရာအပြီး Google မှာကောင်းသောရာထူးအတွက်အသုံးပြုသူများ၏အသိပညာနှင့်မျက်မှောက်၌စုစည်းခံရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကြောင်းကိုအောက်မေ့ရပါမည် ။
ဘယ်လောက် Warsaw ကိုအတွက် positioning ကိုပါတီများမှကုန်ကျပါသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ positioning ကို၏အခြေခံကုန်ကျစရိတ် PLN 350 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစားအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာစကားပြောနေကြသည်လျှင်ဒီတစ်အလွန်အကျွံစျေးနှုန်းမဟုတ်ပါဘူး: Warsaw ကို Centralan စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ပွငျသစျဟောငျးမြို့၏ positioning ကို။
05-119 legionowo, ul ။ Piaskowa 35 / 25
Tel ။ + 48 536 003 117
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒကို Google search engine ကို၌သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်၏မြင်ကွင်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ပိုလန်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်၏တဦးတည်းပြောဆိုပါ။
ဝါဆောအတွက် SEO ဆိုသည်မှာသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်သင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုယူပြီးလိုအပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဝါဆောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးဆောင်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲအညီက်ဘ်ဆိုက်စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ HTML code တွေဟာပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက် eg လှုပ်ရှားမှုများ။ ထိုအခါက်ဘ်ဆိုက် positioning ကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သော Instagram ကိုအဖြစ်အလွန်အောင်မြင်သောလူမှုရေးအကောင့်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် 90 ကျော်% Warsaw ကိုအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတည်နေရာအားဖွငျ့ဖောက်သည်များ၏အလွန်အရည်အသွေးမြင့်အောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်အနေအထားကိုခုန်နီးပါးအမြဲ Google ထံမှအသစ်သောဖောက်သည်အတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအလှည့်အတွက်, Google, Bing, Yahoo, တောင် Facebook ကိုအတွက်သင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအများကြီး သာ. ကြီးမြင်ကွင်းသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဒီတော့အလားအလာဖောက်သည်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အုပ်စုတစ်စုရောက်ရှိ။ ဒါဟာတူညီတဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။
A ကောင်းဆုံးနှင့်ထိရောက်သော SEO ဆိုသည်မှာအေဂျင်စီအမြဲ Warsaw ကိုကဲ့သို့သောမွို့တှငျ website တစ်ခုတည်နေရာ၏စိန်ခေါ်မှုတက်ယူပါလိမ့်မယ်။
ဝါဆောနဲ့ပိုလန်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အနီးတဝိုက်က်ဘ်ဆိုက် positioning ကို၏စျေးနှုန်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုအချက်များ။
အဘယ်အရာကို Mazovia ၌သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်၏ positioning ကိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားသင့်သလဲ။
ငါသည်သင်တို့ကိုဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဦးဆောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်း. ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ positioning ကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးတခု SEO ဆိုသည်မှာစာရင်းစစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
positioning / SEO ဆိုသည်မှာတစ်ဦးကိုပုံမှန်အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဇာတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက် Google မှာမြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။
Google တွင်စာမျက်နှာ၏မြန်နှုန်း Check
ဒီမှာ Check: https://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/
အဆိုပါ DA စစ်ဆေးနေပြီးနောက် - ဒိုမိန်းအာဏာပိုင်နဲ့ PA - စာမျက်နှာအာဏာပိုင်။ ဒါက Google ကအဆင့်အချက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်မြင်နေရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Google ပေါ်တွင်သဘာဝအလျောက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုပမာဏကိုစစ်ဆေးနေရကျိုးနပ်ပါတယ်။ နှင့်မည်မျှအချက်များစာမျက်နှာ၏ positioning ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှအားတွင်, ဝါဆောထဲမှာ website တစ်ခု၏ positioning ကိုစျေးနှုန်းကိုလည်းဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းနှင့် client ကိုကရွေးချယ်သော့ချက်စာလုံးများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆိုက်ပိုကောင်းအောင်ပါဝင်သည်။ အကြောင်း, တိုတောင်းထဲမှာသငျသညျဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလက်ရှိပြင်ပဖိုရမ်များအပေါ်ထုတ်ဝေတန်ဖိုးရှိသောဘလော့ဂ်နဲ့ content ပေါ် ပို. ပို. အလေးပေးချပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကကျွန်တော့်အမြင်ထဲမှာ Google တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအကြောင်းအရာပိုင်သောအကောင်းဆုံးနှင့်အယူဝါဒတစ်ခုကိုကျွန်တော် Warsaw ကိုအတွက်နေရာဝက်ဘ်ဆိုက်များသူတို့ရဲ့စာဖတ်သူတွေကိုဆက်ကပ်အလွန်အရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်သင်တန်း၏, သည်, နှင့် Google search engine ကို။
ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့အနိမ့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ domains များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းပြင်ပလင့်များမှဦးဆောင် - ကျနော်တို့တခါတရံဝဘ်ဆိုဒ်များမှာလည်း "အတိတ်ကာလကနေနေရာချ၏အမှားများကို" နဲ့ဝန်ကိုထမ်းဖြစ်ကြောင်းသတိရရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်တော် SEO ဆိုသည်မှာတိုးမြှင့်ဖို့တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ခက်ခဲပင်ရက်သတ္တပတ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကိုလည်းကူကယ်ရာမဲ့ကိစ္စများတွင်ကူညီပေးပါမည်။ အဘယ်မှာရှိ Google ပေါ်တွင်တည်နေရာအားအလွန်ခက်ခဲသည်။ သေချာဘို့ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များ? ကျနော်တို့ Warsaw ကိုတလျှောက်လုံးလုပ်ကိုင်
ကျနော်တို့သာပြည့်စုံစျေးကွက်နှင့် positioning ကိုန်ဆောင်မှုပြုပါ။
ကျွန်မဆိုလို, positioning ကိုဝါဆောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ခေါင်းစဉ်မရှိဖြတ်လမ်းလည်းမရှိ။
အတူတူကျနော်တို့ Warsaw ကိုအတွက် positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အတွေ့အကြုံ 150 နှစ်ကျော်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ Warsaw ကိုအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏သင့်လျော်သော positioning ကိုလုပ်ဆောင်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဖောက်သည်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Bing မှနှင့် Google အတွက်အမြင့်မားဆုံးရာထူးအပေါ်အမြဲရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ Warsaw ကိုအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုစတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှု (ကြှနျုပျတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်နေရာဘယ်မှာအတိအကျသောအရပ်တို့ကိုမ) နှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ Warsaw ကိုမြင့်မားလိုအပ်ချက်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်လည်း positioning ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အေဂျင်စီဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မန်နေဂျာကိုအောင်မြင်စွာမြို့တော်ကနေအချမ်းသာဆုံး clients များဝတ်ပြုကြလော့။
သငျသညျဝါဆောအတွက် OLX အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ!
ဝါဆောထဲမှာက်ဘ်ဆိုက် positioning ကို၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွင်ကြည့်ပါ။
ဒီတော့ positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ Warsaw ကိုအမြဲကြှနျုပျတို့အတှကျ key ကိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အထူးကုနှစ်ပေါင်းများစွာဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲဗျူဟာမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းစီကုမ္ပဏီချဉ်းကပ်။ Warsaw ကို - တစ် divisor များအတွက် positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမတန်းတူရှိသည်။
ကျနော်တို့သာသင် Google မှာပိုပြီးအဆင့်အနိုင်ရခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုထိရောက်သောအင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး tools တွေကိုသုံးပါ။
အသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အင်္ဂလိပ်စာနှင့်အာရဗီ positioning ကိုစာမျက်နှာများတွင်ဒူဘိုင်းအတွေ့အကြုံ, အင်တာနက်ပေါ်ရှိယှဉ်ပြိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ရှုံးနိမ့်အာမခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်ဈေးကွက်ထဲမှာပိုပြီးယုံကြည်မှုခံစားရစေမည်နှင့်ဝါဆောအတွက် positioning ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များသင့်ထုတ်ကုန် / သင့်န်ဆောင်မှုများအတွက်ရှာဖွေမှုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးပွါးစေနှင့်သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာအမြတ်အစွန်းခံစားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး Warsaw ကိုအတွက်ထိရောက်သောနှင့်စျေးပေါ positioning ကိုကျေးဇူးတင်။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲပေမဲ့အဲဒီနှစ်ခု adjective နာမဝိသေသနလက်၌လက်သွားပါ။